YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, November 05
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/05/20080အကြံပြုခြင်း
နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ သတင်း
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့ နယ် ဖော့ကန်ရပ်ကွက် သံမဏိ ( ၁ ) လမ်း မှာ သံမဏိ ( ၅ ) လမ်းအထိ မြေနေရာအား အာဏာပိုင်များမှ ဦးပိုင် ကုပ္ပဏီ လိမိတက်သို့ ရောင်းချခဲ့ပါသည် ။ ထိုသို့ ရောင်းချခဲ့ ပြီးနောက် ( ၂၆ . ၁၀ . ၂၀၀၈ ) ရက်နေ့တွင် ၎င်း ရပ်ကွက်တွင်းနေထိုင်ကြသော အိမ်ခြေ သုံးရာနီးပါအား လှော်ကား မြို့ နယ် ( ဒ ) ဒဒွေး ရပ်ကွက် ရှိ နာဂစ်လေဘေးဒုက္ခ သည်များအားလှူဒါန်းရန်အတွက် ဆောက်လုပ် ထား သော လေဘေးအိမ်များသို့အတင်းအဓ္ဓမပြောင်းရွှေ့ ခိုင်းခဲ့ပါသည် ။
ထိုသို့ပြောင်းရွှေ့ ရာတွင် ဖော့ကန်ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ မှ အိမ်ဌားနေထိုင်သူများအား ငွေကျပ် သုံးသောင်း ( ၃၀၀၀၀ ) မှ တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀ ) ထိတောင်းခံ ပြီးလှော်ကားမြို့ နယ်ရှိ လေဘေး အတွက်ဆောက်လုပ်ထားသောနေအိမ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်စေခဲ့ပါသည် ။ ထိုသို့ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် ကြသော နေအိမ် များမှာ ယနေ့အထိ ( ၂၂၁ ) အိမ်ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ ငွေပေး နိုင်ခြင်းမရှိသည့်မိသားစု အိမ်ခြေပေါင်း မှာ ( ၅၀ ) ကျော်ကျန်ရှိနေပါသေး သည် ။ ထိုမိသားစုဝင်များမှာ ဆင်းရဲ နွမ်းပါး လွန်းသည့် အတွက် ငွေ ပေးခြေ နိုင်ခြင်းမရှိသလို အခြားတနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် နိုင် ခြင်း လည်း မရှိပါ ။ ထိုအိမ်ထောင်စုများအား ( ၁ . ၁၁ . ၂၀၀၈ ) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဧည့် စာရင်းမပေးတော့ပဲ ညအချိန်များတွင် ဧည့် စာရင်း အကြောင်း ပြကာ အာဏာပိုင်များမှ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းများပြုနေပါ သည် ။
အချို့ မိသားစုများမှာ နီးစပ်ရာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ များနေအိမ် တွင် ည အချိန်ရှောင်တိမ်း ၍ အိပ်စက်ကြရ ပြီးနေအချိန်တွင် မိမိတို့နေအိမ်များသို့ပြန်လည် နေထိုင် ကြရပါသည် ။ ထို့အခါ အာဏာ ပိုင်များမှာ ညအချိန်လူမရှိသော နေအိမ်များ အား ပိုင်ရှင်မဲ့ သတ်မှတ်ကာ ( ၃ . ၁၁ . ၂၀၀၈ ) ရက်နေ့မှ ( ၄ .၁၁ .၂၀၀၈ ) အထိ ဖော့ ကန်ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ နှင့်ရာအိမ်မှူး အပါအ၀င် အာဏာပိုင်များမှ နေအိမ်များအား ဖြိုဖျက်နေပါသည် ။ အခြားသို့ရှောင်တိမ်း ညအိပ်စရာ မရှိ၍ မိမိတို့နေအိမ်များ၌ ပင်အိပ်စက် ကြသူများမှာလည်း ညအချိန် ဧည့်စာရင်းစစ်အချိန်တွင် အဖမ်းခံ ရ ပြန်ပါသည် ။ ထိုသို့အဖမ်းခံ ရသူများ ကိုတော့အာဏာပိုင်များမှ နေအိမ်များ ဖျက်ပေးလျှင်လွှတ်ပေး မည် ဆိုသောကြောင့်ကြောက် လန့် ၍ ဖျက် ပေးရန် ဂတိပြု လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသူများလည်းအချို့ရှိနေပြီး အချို့ မှ ဖျက်ပေးရန် လက်မှတ် မထိုး သော ကြောင့် ဆက်လက် ဖမ်းဆီးခံထားရ သူများလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည် ။
ယခုအချိန်တွင် နအဖ သည် နိုင်ငံပိုင် သယံဇာတများ ၊ မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မြေနေရာများအား အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ခွဲခြမ်း၍ တဖက်လှည့် ဖြင့် ရောင်းချခြင်းများပြုနေသကဲ့ သို့၎င်း တို့၏လက်အောက် ငယ်သားများမှလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိတန်ဖိုးကြီးမားသော မြေနေရာများအားလည်း နီးစပ်ရာ ကုပ္ပဏီများ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ရောင်းချလျှက်ရှိနေပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားများ ၏ ကျေးရွာ များအား ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ ဖျက်ဆီးနေ ခြင်းသာမက ၊ ယခုအခါတွင် မြို့ကြီးများ ရှိလူနေရပ်ကွက် များအား အတင်းအဓ္ဓမ ပြောင်းရွေ့ ဖျက်ဆီးခြင်း ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တင် ပြလိုက် ပါသည် ။
အင်းစိန်ထောင် အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ နှင့်ပတ်သတ်သော သတင်း
အင်းစိန်ထောင် အတွင်း စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ခြေထောက်(ပေါင်)တွင်
သေနတ်ထိမှန်ခဲ့ ရပြီး ထောင်ဒဏ် (၄)နှစ်ပါ ကျခံနေရသော N.L.D သင်္ဃန်းကွန်းမြို.နယ်
လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုမြသန်းထိုက် ကို ၃.၁၁.၂၀၀၈ နေ့နံနက်လေး နာရီ အချိန်တွင်
တောင်ငူထောင် သို့ ပြောင်းရွှေ ပြစ်လိုက် သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
အဆောင်များတွင် မတရား အကျဉ်းချခံနေရသော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများသည်
တခြားပြစ်ဒဏ် များကျခံနေရသော အကျဉ်းသားများ၏ အနိုင်ကျင့်မူ၊မတရားမူ များကို ခံစားနေရပါသည်။ အခြား ခိုး၊ဆိုး၊လုယက် မူများနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသော သူများကို
အဆောင်တွင် လူကြီးခန့်အကွက်ကျကျ ဖန်တီးကာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များကို နှိပ်စက်၊
မတရား အကောက်ကြံ မူများ ရှိနေပါသည် ဟု ယနေ့၃.၁၁.၂၀၀၈ သင်္ဃန်းကွန်းမြို့နယ်တွင်
အင်းစိန်ထောင်တွင်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီး အမူရင်ဆိုင်နေရသော မနီလာသိန်း၊မမီးမီး၊
မစန္ဒာမင်း(ခ)ရွှီး၊မသက်သက်အောင်၊မမာမာဦးတို. (၅)ဦး သည်တရားရုံးကိုအယုံအကြည်
မရှိ၍ မိမိတို.၏ ရှေ့နေပါဝါ များကို ရုပ်သိမ်း ပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင် သွားမည်ဟု ထောင်ဝင်စာတွေ့စဉ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်ဟုယနေ့ရုံးထုတ်လာသူများထံမှ သိရှိရသည်။
Posted by free for country
မြန်မာပန်းချီဆရာ၏ တကိုယ်တော်ပွဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည်
နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
(photo: lifestyle magazine 2007 dec)
တင်ဝင်း(ဗိဿနိုး)၏ တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ ပန်းချီပြခန်းတွင် ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဦးတင်ဝင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ ဗိဿနိုးပန်းချီပြခန်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ မင်းဘူးမြို့ဇာတိဖြစ်သူ ဦးတင်ဝင်းသည် ပန်းချီပန်းပုကျောင်း(မန္တလေး)တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ၂ နှစ်အကြာ ၁၉၇၂ မှ စတင်၍ ပန်းချီပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းသာမက နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ၎င်း၏ လက်ရာများကို ပြသလျက်ရှိသည်။
Golden Triangle Art မှ တင်ဝင်း(ဗိဿနိုး)၏ လက်ရာများ
Amitmay မှ လက်ရာများ
ရက် ၂၀ ကြာ ပြသမည့် တင်ဝင်း(ဗိဿနိုး)၏ ပန်းချီပြပွဲ ဖိတ်စာ
ကိုသက် နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈
မနေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကြီး အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံးကမျှော်နေကြတဲ့အတိုင်း အာဖရိကနွယ်ဖွား ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama) ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်း သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ပထမဆုံး လူမည်းသမ္မတဖြစ်လာသည့် အိုဘားမားက မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကို မိန့်ခွန်းပြောကြားရင်း လက်ပြနှုတ်ဆက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - အေပီ)
လေးနှစ်ကိုတကြိမ်ပုံမှန်ကျင်းပနေကြ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲဟာ မဲဆန္ဒရှင် အမေရိကန်ပြည်သူတွေချည်းသက်သက် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကမ္ဘာလုံးက ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလို အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်း ကမ္ဘာ့လူသား တွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့် လူအများအာရုံထားမှုကို ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခေါက်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့မတူ ထူးခြားနေလို့ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ အာရုံ စိုက်ခြင်းကို ခံရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထူးခြားချက်ကတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ သမ္မတလောင်းဟာ အာဖရိကန်နွယ်ဖွား လူမည်းတယောက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း အထူးစိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ သတင်းသမားတဦးကတော့ “အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကို စလောင်းတွေကနေ တိုက်ရိုက် စောင့်ကြည့်ကြတယ်။ သာမန်ပြည်သူကအစ ဘယ်သူသမ္မတဖြစ်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ အဓိကတော့ လူမည်းသမ္မတဖြစ်တာကြောင့်ပေါ့” လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်း တဦးကလည်း “ကျနော်သာ အမေရိကန်တယောက်ဆိုရင် သူ့ကိုပဲ (အိုဘားမား) မဲပေးမိမှာ၊ ပြည်သူ တွေက ဆော်မယ်တီးမယ်ဆိုတာကို သိပ်မလိုချင်ကြတော့ဘူးလေ” လို့ ပြောပါတယ်။
ကွန်ပျူတာပညာရှင်တဦးကမူ “အိုဘားမားကိုကြိုက်တဲ့သူများတာကတော့ သူကအသက်ငယ်လို့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်နိုင် မယ်လို့မျှော်လင့်လို့၊ နောက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်သူတွေက ခုချိန်မှာ အပြောင်းအလဲကို အရမ်းလိုချင်နေကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိုဘားမားကို ထောက်ခံကြတာ” လို့ ပြောပါတယ်။
တချို့ကလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ်မူတည်ပြီး အမေရိကန် သမ္မတသစ်ကို စိတ်ဝင်စားကြတာပါ။ မစ္စတာ အိုဘားမား ကကော အမေရိကန်ပြည်သူတွေအပြင် ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအကြိုက် ဘာတွေများလုပ်ပြဦးမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားသူက ထုနဲ့ဒေးပါ။
“လူတွေက အီရတ်စစ်ပွဲအခြေအနေကိုသိချင်ကြတယ်၊ သမ္မတ ဘုရ်ှက အီရတ်ကိုတိုက်ပြီး ဆဒမ်ဟူစိန်ကို ဖြုတ်ချပေးခဲ့ တာကို သဘောတွေ့ကြတယ်။ အာဏာရှင်ကိုဒီလိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာကို တော်တော်များများက လက်ခံကြတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာကော အဲလိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဆိုပြီး မျှော်ကြတယ်။ ဆိုလိုတာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အမေရိကန်က ကယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်နေကြတယ်” လို့ မြန်မာပြည်သူတွေကြားက ပြောဆိုမှုတွေကို အထက်ပါ သတင်းသမားက ပြန်လည်ရှင်းပြပါတယ်။
တချို့ကလည်း အမေရိကန်ပြည်သူတွေက မစ္စတာ အိုဘားမားကို သမ္မတ အဖြစ် ရွေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်က အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေဟာ ၂၁ ရာစုမှာ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မြန်မာ စာရေးဆရာအများစုကလည်း အိုဘားမား နိုင်မယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းခဲ့ကြလို့ အခုတော့သူတို့ရဲ့ အတွေးတွေ တကယ်ဖြစ် လာခဲ့ပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာနေကြပါတယ်။
မစ္စတာ အိုဘားမား အနိုင်ရခဲ့လို့ မြန်မာပြည်သားအများစုက ဝမ်းသာကြည်နူးနေချိန်မှာ တချို့ကလည်း မတူညီတဲ့ စိတ်ခံစား မှုတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက် ရေးသားနေသည့် ပြည်တွင်းက စာရေးဆရာတဦးက “ကျနော်ကတော့ မက်ကိန်းရှုံးသွား လို့ စိတ်မကောင်းဘူး။ သူကအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့ဖူးတယ်။ မြန်မာ့အရေးကို ပိုလုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ နောက် သူက အသက်ကြီးတော့ အတွေ့အကြုံပိုရှိတယ်။ စစ်ရေးကော အုပ်ချုပ်ရေးမှာကော ပိုပြီးလုပ်နိုင်မယ် ထင်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အခုအချိန်မှာက မြန်မာပြည်သူတွေဟာ တခြားသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုသာ ပြောဆိုနေကြတာ များပါတယ်။
နိဂုံးချူပ်ရရင်တော့ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို အထူးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မြန်မာ့ပညာတတ် အသိုင်းအ၀န်းမှာ အိုဘားမား နိုင်တာကို ကြိုဆိုကြတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား အပြောင်းအလဲကို မြင်ချင်ကြတယ်၊ လိုချင်ကြတယ်ဆိုတာ ပိုထင်ရှားလာတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလို စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးလည်း အပြောင်းအလဲကို အရမ်းလိုချင်နေကြတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ မျှော်လင့်လို့မရတာကို သူများတိုင်းပြည်က ရွေးကောက်ပွဲကိုကြည့်ပြီး
အမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အပြောင်းအလဲကိုထောက်ခံအားပေးနေကြတယ်ဆိုတာ သေချာလွန်းလှပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့၏ ရှေ့နေကို တရားရုံးက ၀င်ခွင့်မပေး
ကိုစိုး နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး တွင် ယနေ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာသို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေအား အာဏာပိုင်များက ၀င်ခွင့် မပေးကြောင်း သိရသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဖြစ်သော ကိုသိန်းသန်းထွန်းနှင့် ၁၃ ဦးအား ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာသို့ သွားရောက်သည့် ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေ ဦးကျော်ဟိုးကို အာဏာပိုင်များက တရားရုံးတွင်းသို့ ၀င်ခွင့်မပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ ရှေ့နေနှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
“ဦးကျော်ဟိုးက သူ့ကို ဘာလို့ဝင်ခွင့်မပေးရတာလဲလို့ ထောင်အာဏာပိုင်တွေကို မေးတော့ ထောင်အာဏာပိုင်က သူတို့ လည်း မသိဘူးတဲ့၊ အထက်အမိန့်အရ လုပ်ရတာလို့ပြောတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်းနှင့် ၎င်းတို့ကိုလည်း လှိုင်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်နေရသူများ၏ ရှေ့နေပါဝါရုပ်သိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင်ပြု လုပ်မှု ပုဒ်မ ၃ ဖြင့် အာဏာ ပိုင်များက တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရသည်ဟု ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန် က ပြောပြသည်။
“ကျနော်တို့ကို လှိုင်မြို့နယ် တရားရုံးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးချုပ်က စွဲတာ၊ မနက်ဖြန် လျှောက်လွှဲချက် သွားပေး ရမယ်”ဟု ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
စစ်အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထားသည့် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများ၏ အမှုများကို လိုက်ပါအကျိုးဆောင်ပေး နေသော ရှေ့နေများအား ယင်းသို့ ဖိအားပေးအကျပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ လွန်ခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ လ ကုန်ပိုင်းတွင် ရှေ့နေ ကိုညီညီထွေးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ၍ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှေ့နေ ကိုညီညီထွေးကို ၎င်း၏အမှုသည်များဖြစ်သော လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အဖွဲ့ဝင် ကိုဝေလွင်မျိုး၊ ကိုအောင်မင်းနိုင်၊ ကိုရန်နိုင်ထွန်းတို့နှင့်အတူ တရားရုံးအား အနှောင့် အယှက်ပေးသည့် ပုဒ်မ ၂၂၈ ဖြင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီလို နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့အမှုလိုက် ရှေ့နေတွေကို ပိုပြီး တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်လာလေ မမျှတတဲ့ တရားစီရင် ရေးစနစ်က ပိုပြီးထင်ရှားလာလေဖြစ်မှာပါပဲ”ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တဦးက ဝေဖန်ပြောဆိုသည်။
အောင်သက်ဝိုင်း နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက အပြည့်အဝထ်ိန်းချုပ်မည့် ရွှေကုန်သည်များအတွက် သီးသန့် ဈေးကွက်ကြီး နှစ်ခုကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေသည့် သတင်း ကြောင့် ရွှေကုန်သည်များအကြား စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ရန်ကုန် စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀န်းမှ ကြားသိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေဆိုင်တဆိုင်တွင် ရောင်းသူ ဝယ်သူများဖြင့် စည်ကားနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - မြန်မာတိုင်းမ်)
သီးခြား ရွှေရောင်းဝယ်မှု ဈေးကွက်များ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် စစ်အစိုးရအနေနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းကို ပိုမို ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည် ဟူသော မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း၏ အကြံပြုချက်ကြောင့် ထိုဈေးကွက်များ ပေါ်ပေါက်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရွှေဆိုင်များအားလုံး ထိုဈေးကွက်တွင်သာ အရောင်း အ၀ယ် ပြုရမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဝင်းက ပြောခဲ့ကြောင်း ၎င်းဂျာနယ်တွင် ရေးသား ထားသည်။
“ဂျာနယ်မှာ ရွှေအရောင်းအ၀ယ် သီးသန့် ဈေးကွက်ကြီးတွေ အကောင် အထည်ဖော်နေတယ် ဆိုပြီး ဦးကျော်ဝင်းကပြောတော့ ရန်ကုန်ရွှေလောက မှာတော်တော် ဂယက်ရိုက်သွားတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ရွှေအသင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ရွှေဈေး ထိန်းချုပ်ချင်တာပါ” ဟု ရွှေဘုံသာလမ်းမှ ရွှေဆိုင် ပိုင်ရှင်တဦးကပြောသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် သီးသန့်ဈေးကွက်ကြီးများ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြင့် ရွှေဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်ခြင်းများ ကာကွယ်နိုင်လာမည်ဟု ဦးကျော်ဝင်းက ပြောကြောင်း The Voice Weekly တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ သီးသန့် ရွှေဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းအ၀ယ်ပြုရာတွင် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ရွှေအသင်းက ရေးဆွဲနေကြောင်းနှင့် ပြီးစီးပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မောင်ဦးထံအတည်ပြုချက် ရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။
“သီးသန့် ရွှေဈေးကွက် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ဂျာနယ်ထဲပါလာမှ သေချာ သိရတာ။ ပြီးတော့ ဈေးကွက်မှာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ရောင်းဝယ်ရမယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ အဲဒီစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဆိုတာက အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရေးဆွဲ ထားတာလည်း မဟုတ်ဘူး” ဟု မန္တလေးမှ ရွှေဆိုင် ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသည် နိုင်ငံတ၀န်းရှိ ရွှေလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀န်းကို ကိုယ်စားပြုသော အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘဲ စစ်အစိုးရစိတ်ကြိုက် စီးပွားရေးသမားများကို သာ ရွေးချယ်ခန့်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အတွက် ထိုအသင်းက ဖော်ဆောင်မည့် ဈေးကွက် မှာလည်း မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း မန္တလေးမြို့၏ နာမည်ကျော်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကြီး တဦးက သုံးသပ်သည်။
“ရွှေအသင်းမှာ အသင်းဝင် ရှစ်ရာကျော်ပဲရှိတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ ရွှေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူ သောင်းဂဏန်း ချီရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အသင်းဝင်ရှစ်ရာကျော်နဲ့ လုပ်တဲ့ဈေးကွက်က အားလုံးကိုကိုယ်စားမပြုပါဘူး” ဟု ထိုလုပ်ငန်းရှင်ကပြောသည်။
ရန်ကုန် ရွှေဘုံသာလမ်းရှိ ရွှေလေပတ်ကား ပွဲစားများမှာလည်း ရွှေအသင်းက ဆောင်ရွက်မည့် ဈေးကွက်ကြောင့် အလုပ် လက်မဲ့ ဖြစ်သွားကြမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြကြောင်း သိရှိရသည်။
“ရွှေအသင်းရဲ့ ဈေးကွက်မှာပွဲစားတွေ လက်မခံဘူး၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကုန်သည်တွေပဲ ရောင်းခွင့် ပြုမယ်ဆိုပြီး ပြောထား တော့ တကယ်ဈေးကွက်ဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့ လေပတ်ကား ပွဲစားတွေ ဒုက္ခပဲ။ ရွှေဈေးကွက်ကို မှီခိုလုပ်စားနေတဲ့ မိသားစု ထောင်၊ သောင်းပေါင်း များစွာ အတွက်တော့ ရင်လေး စရာပေါ့ဗျာ” ဟု ပွဲစားတဦးကပြောသည်။
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အငြိမ်းစားပါမောက္ခတဦးက ရွှေအရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်ဟူ၍ သေသေ ချာချာ ရှိလာမည် ဆိုသော အချက်မှာ ဘောဂဗေဒသဘောတရားအရ မှန်ကန်သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုကင်းပြီး မည်သူမဆို တရားနည်းလမ်း တကျ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်မှု ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
“အစိုးရက ဈေးကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် ဈေးကွက်ကို သေချာဖြစ်စေချင်လို့ လုပ်တာဆိုရင် လုံးဝကြိုဆိုရ မှာပါ။ စီးပွားရေး သဘောတရားအရ ဒါဟာ လုံးဝမှန်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းကို ၂၀၀၂ ခုနစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော် ရှိရာတွင် အများစုမှာ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုး လုပ်ငန်းရှင် စီးပွားရေးသမားများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်
အေးလဲ့ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်(အန်အယ်လ်ဒီ)၏ ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ စုံညီအစည်းအဝေး တွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီတွင်း ကြုံတွေ့နေသည့်အခက်အခဲများကို သုံးသပ်ဆွေးနွေး ကြကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးပွဲတွင် မကြာသေးခင်က စစ်အစိုးရ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ သည့် သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်အမတ်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဦးခင်မောင်ဆွေက“ အချိန်က ၃နာရီကျော်ပဲကြာတယ်၊ အန်ကယ်တို့မရှိခင် ပါတီကိုဘယ်လိုသယ်ဆောင် လာခဲ့တယ် ဆိုတာရယ်၊ နောက်ကြောင်းပြန်ပြောတယ်၊ လူငယ်ကိစ္စလည်း အနည်းနည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာပိုင်များက အယ်အယ်လ်ဒီ၏ နယ်ရုံးဖွင့်ခွင့် ပိတ်ပင်ထား ခြင်း၊ တရားဝင် အန်အယ်လ်ဒီဆိုင်းဘုတ် တင်ခွင့်မရခြင်း၊ ရန်ကုန်ရှိ အဖွဲ့ချူပ်ရုံးအပိတ်ခံရခြင်း၊ ပြည်သူများကလည်း အဖွဲ့ချူပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်ဆံရမှာကို ထိတ်လန့်ကြခြင်း၊ မြို့နယ်များရှိ အဖွဲ့ဝင်များ သည်လည်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် များ၏ တင်းကျပ်မှုများကြောင့် လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်ခွင့်မရခြင်း စသည့် စစ်အစိုးရဖိနှိပ်မှုများကြားမှ လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်နေရခြင်းများကို ယခုအစည်းအဝေးတွင်ပြောဆို ဆွေးနွေးသည်ဟု လည်း ဦးခင်မောင်ဆွေကပြောသည်။
ယင်း အစည်းအဝေးတွင် စစ်အစိုးရ ကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး သေသေချာချာ ဆွေးနွေးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“လက်ရှိစစ်အစိုးရ က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အတင်းဆွဲခေါ်နေတဲ့ကာလမှာ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို အဖွဲ့ချူပ်အနေဖြင့် စဉ်းစားနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို နှစ်ဦး နှစ်ဘက်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင် နိုင်ငံရေး ပြဿနာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တဦးတည်းအနေနဲ့ယူဆပါတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ၎င်း၏သဘောထားကိုပြောသည်။
မိထ္ထိလာမြို့နယ်ရှိ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များကလည်း နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က မိထ္ထိလာခရိုင် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်အရ တောင်းဆိုချက် ၃ချက်ကို ဗဟိုအလုပ်အလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့သို့ စာဖြင့်ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း မိထ္ထိလာမြို့နယ် အန်အယ်လ်ဒီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ကပြောသည်။
တောင်းဆိုချက်များမှာ“ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များကို တိုးချဲ့အားဖြည့် ဖွဲ့စည်းပေးပါရန်၊ တနိုင်ငံလုံးရှိ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ချူပ်မှ အရွေးချယ်ခံ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို အစည်းအဝေး တရပ်ခေါ်ယူ ကျင်းပပေးရန်၊ ဗဟိုလူငယ်အဖွဲ့ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပေးရန်”တို့ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ကပြောသည်။
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ဆက်လက်ပြီး “လောလောဆယ်အနေအထားအရ တဘက်အာဏာရှင်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ က ကျမတို့ ပါတီမှာ အင်အားရှိဖို့လိုတယ်။ ဗဟိုကအားရှိမှ ကျမတို့အောက်ခြေကအားရှိမယ်။ ဗဟိုက အစည်းအဝေးခေါ်မယ်။ ဗဟိုကို အင်အားဖြည့်ဆည်းမယ်၊ အားမာန်ပါမယ့်ညွန်ကြားချက်တွေလုပ်နိုင်မှ ကျမတို့အောက်ခြေကလုပ်နိုင်မယ်။ ကျမတို့ပါတီက အားရှိမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်း ကြောင်းပေါ်
ရောက်မယ်” ဟုလည်း ပြောသည်။
၎င်းအန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စုံညီအစည်းအဝေးကို နေ့လယ်၁နာရီမှ၎နာရီခွဲအထိ ဆွေးနွေးခဲ့ ပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ပြုပြင်ရေး ခက်ခဲနေဆဲ …
ကြည်ဝေ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈
နာဂစ် မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးစကတည်းက ယာယီတဲအဖြစ်ဆောက်ထားခဲ့သော ရွက်ဖျင်တဲကလေးမှာ ၆ လ ကျော် အကြာမှာ တော့ ဘေးအကာများ စုတ်ပြဲကာ မိုးရွာလျှင်လည်း ခေါင်တလျှောက်မှ မိုးရေများယိုစီးလျက် ရှိပေပြီ။
ထိုအမိုးအကာ မလုံမခြုံနှင့်အဖြစ်ဆောက်ထားသော တဲကလေးသည် သံဃာ ၃ပါးနှင့်ကိုရင်လေး ၁ ပါး သီတင်း သုံးရာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲ ၊ လွှစာကျေးရွာရှိ ယာယီဘုန်းကြီး ကျောင်းဆောင် တဆောင် ဖြစ်သည်။
"ဒီတဲထဲမှာပဲ ဘုန်းဘုန်းတွေ ၀ါဆိုခဲ့ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရေရှည် သာသနာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကတော့ ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်"ဟု ဖြစ်သလို သီတင်းသုံးနေ ကြရသော ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ အဖြစ်ကို စိတ်မသက်သာစွာဖြင့် လွှစာ ရွာသားတဦးက ပြောပြသည်။
ထိုလွှစာကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ကြသူများအနေနှင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပြိုပျက်သွားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပြန်လည် တည်ဆောက်လိုသော်လည်း ရွာအနေနှင့် ငွေရေးကြေးရေး မတတ်နိုင်ကြသောကြောင့် အလှူရှင် များကို စောင့်မျှော်နေရကြောင်း သူက ဆိုသည်။
"ကျနော်တို့ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဦးစားပေးပြီး ဆောက်စေချင်တာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် လာဆောက်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေကို မေးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက အစိုးရဆောက်ခိုင်းတဲ့အထဲမှာ မပါဘူး၊ ဆောက်ချင်ရင်တော့ စာတင်ပြီး ဆောက်ခွင့်ကျမှ ဆောက်ရမယ်တဲ့" ဟု အဆိုပါကျေးရွာမှ ရယက ဥက္ကဌ က ပြောသည်။
လွှစာကျေးရွာကဲ့သို့ပင် ပြင်စလူမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျားချောင်းကျေးရွာတွင်လည်း သံဃာများမှာ တ၀က်တပျက် ပြိုပျက် နေသော ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲတွင် သီးတင်းသုံးနေရသကဲ့သို့ ရွေးကျေးရွာ၊ ရေတွင်းရေကန်ကျေးရွာ၊ သပြေချိုင်ကျေးရွာ၊ ကွင်းယား၊ အ၀ကားကျေးရွာစသည့် ကျေးရွာများအပြင် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှရေတွင်း ကုန်းကျေးရွာ၊ ကန်စု ကျေးရွာ၊ မင်ဆယ်ကျေးရွာ၊ တဇောင်းကျေးရွာ တို့တွင်လည်းကောင်း ရဟန်းသံဃာများ သည် မြေခပြိုပျက်သွားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေး မြေကွက်လပ်တွင် ရွက်ဖျင်တဲကလေးထိုးပြီး ဖြစ်သလို သတင်း သုံးကာ သာသနာရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရွာသားများက ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများသို့ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများကို လက်ရှိအချိန်ထိ စောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိ သော ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတခုမှ စေတနာ့ ၀န်ထမ်းတဦး၏ ပြောပြချက်အရ လပွတ္တာခရိုင် မော်လမြိုင် ကျွန်းမြို့နယ် အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၁၀၁ စုရှိကြောင်း ထိုကျေးရွာများထဲမှ ပျက်စီးသွားသော ဘုန်းကြီး ကျောင်းများမှာ ၉၉ ရာနှုန်းခန့်ရှိပြီး ယနေ့ထိ ၉၈ ရာနှုန်းခန့်မှာ ယာယီတဲထိုးကာ ဖြစ်သလို သီတင်းသုံးနေရ ကြောင်း၊ ပြင်စလူမြို့နယ်တွင် လည်း ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၁၈ အုပ်စုရှိရာ ရှိသမျှဘုန်းကြီးကျောင်း အားလုံး မြေပေါ် သို့ဘုန်းဘုန်းကျ ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ၉၉ ရာနှုန်းမှာ ဖြစ်သလို သီတင်းသုံးနေကြရကြောင်း၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ် ဒေသများမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာလည်း ၉၈ ရာနှုန်း ကျော် ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီးး ၆ လတာ ကာလအတွင်း မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသများတွင် လူနေအိမ်များနှင့် စာသင် ကျောင်းများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တသီးပုဂ္ဂလစေတနာရှင်များ စသဖြင့် လူနေအိမ် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းလိုသူများကို အစိုးရမှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း ဘုန်းကြီး ကျောင်းများ အသစ်ပြန် လည်တည်ဆောက်ရာတွင် လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ ခွင့်ပြုချက် တင်ရန်လိုအပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင်ပြုမိန့် ကျမှသာ ဆောက်ရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေး ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတခုမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။
"ကျနော်တို့အဖွဲ့က မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ထဲက ရွာတရွာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်း ဆောက်ပြီးလှူဖို့ စီစဉ်ပြီးပါပြီ၊ စာတင်ရမယ်ဆိုလို့ စာတင်ထားတာလည်း ၄ လကျော်ပါပြီ သက်ဆိုင်ရာကခွင့်ပြုချက် မရသေးဘူး၊ လူနေအိမ်ဆောက်လှူဖို့က လွယ်ပေမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ဖို့က မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ် "ဟု သူက ဆို သည်။
လက်ရှိအနေအထားအရ ယခင်ကလို ရွာတရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းဖြစ်နိုင်သည့် အနေအထားမှာ အားနည်း သွားပြီး အစိုးရအနေနှင့်လည်း တချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို ပြန်ဆောက်ခွင့်မပေးတော့ကြောင်း၊ နာဂစ်ကြောင့် ကျောင်း ရော၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ရွာများမှ ကျန်ရစ်သော သံဃာတချို့ နှင့် ကိုရင်တချို့ကိုလည်း သိက္ခာချ ခိုင်းပြီး လူဝတ်လဲခိုင်းသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း သူ၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရ သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သံဃာတော်များဦးဆောင်သော လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီး ပြီးကတည်းက အစိုးရအနေ နှင့် သံဃာဦးရေ တိုးပွားလာမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် ခုလို ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
မေလ၂ ရက်နေ့တွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလအတွင်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သော ဘုန်းကြီးကျောင်း ပေါင်း ၄ ထောင်နီးပါးရှိကြောင်း သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ စာရင်းများအရ သိရှိရပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အများ ဆုံး မှာ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
သူ့အလှူရှင်နှင့်သူ ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် သာသနိက အဆောက်အအုံများမှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲ မရှိသော်လည်း အများစုမှာမူ အလှူရှင်၏ အကူအညီကို လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်း တဦးက ဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါင်း ၁၁၆၃ ကျောင်း၊ ဘုန်းဘုန်းကျ မြေခ ပြိုကျပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ၇၃၆ ကျောင်း ရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းတွင် လည်း ၂၈၄ ကျောင်းမှာ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော ကျောင်း မှာ ၅၂ ကျောင်းရှိ ကြောင်း သာသာနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် စေတီ၊ဘုရားပုထိုးများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းများ ဓမ္မာရုံ များ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် ဗလီများအပါအ၀င် သာသနိက အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုမှာ စုစု ပေါင်း တန်ဖိုး ကျပ် ၁၅၀ ဘီလျံ အထိ ရှိကြောင်း အစိုးရ၊ အာဆီယံနှင့် ကုလသမဂ္ဂ သုံးပွင့်ဆိုင် စစ်တမ်းကောက် ယူခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများတွင် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဘုရားကျောင်း တက်နိုင်ရေးအတွက် ဘုရား ကျောင်း အသစ်များကို ၄င်းတို့၏ ဒေသများတွင် တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သလို၊ မွတ်စလင် လူငယ်များ အသင်း ကလည်း ၄င်းတို့ ဒေသတွင်းမှ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များ အနေနှင့် သောကြာနေ့တိုင်း ၀တ်တက်နိုင်ရေးအတွက် ဘုရားကျောင်းအဆောက် အအုံသစ်များကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိသောကြာနေ့တိုင်း ၀တ်တက်ရန် အတွက်လည်း ယာယီကျောင်း ဆောက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဒေသများမှ ဒေသခံတို့၏ ပြောပြချက်များအရ သိရှိရသည်။
"ခရစ်ယာန်တွေကလည်း သူတို့ဘုရားးရှိခိုးဖို့အတွက် ဘုရားကျောင်းတွေ ဆောက်ပြီးလို့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်း တက်နေကြပြီ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ဆောက်နိုင်ကြ မယ်မသိဘူး"ဟု ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာခရိုင် ပြင်စလူမြို့နယ် ကုန်းကြီးကျေးရွာသားတဦးက ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဖက်ဒေသ၌ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများရှိနေဆဲ ယခင်ထက်ပို၍လျို့ဝှက်ပြီးစနစ်တကျကျူးလွန်နေ
ကိုဝိုင်း/ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
နအဖစစ်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုဆန္ဒပြသူများကို ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကြာပြီးနောက် ယခုကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဖက်ဒေသများ၌ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ မပျံ့ပွားရေးဆိုင်ရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု စသည့် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်မှုများသည် ယခင်ကထက်ပို၍ လျို့ဝှက်စွာ စနစ်တကျဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၌ အကူ အညီပေးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသော The Thailand Burma Border Consortium (TBBC) အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားသည်။
ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာမျက်နှာ (၇၀) ပါ Internal Displacement and International Law in Eastern Burma အမည်ရှိ အစီရင်ခံ၌ ယင်းသို့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
TBBC သည် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဖက်ရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လွန်ခဲ့သည့် (၆) နှစ်မှစ၍ ပြည်တွင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်စုဆောင်းပြီးတင်ပြနေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်း နအဖ၏ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ပြည်သူများအပေါ်ရက်ရက်စက်ကျူးလွန်နေသည့်အခြေအနေ ဘောင်အတွင်းမှချဉ်းကပ် စုဆောင်းခဲ့ပြီးမှုများကို ပြုလုပ်ပြီး ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒေသအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ မပျံ့ပွားရေးဆိုင်ရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု များသည် နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုမြောက်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကရင်နီပြည်နယ်စသည့်ဒေသများသည် ရာဇ၀တ်မှုအဓိကချိုးဖောက်ခံရသည့် နေရာများဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲများကြောင့် ထွက်ပြေးရခြင်း၊ ကျေးရွာများအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်း၊ အဓမ္မ ငွေကောက်ခံခြင်း၊ မြေယာများသိမ်းခြင်း၊ အဓမ္မစိုက်ပျိုးခိုင်းခြင်း၊ လယ်ယာစိုက်ခင်းများသို့သွားလာခြင်းနှင့် ဈေးကွက်အတွင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို တင်းကျပ်ထားခြင်း စသည်တို့ကြောင့် မိသားစုဘ၀များအတွက် ၀င်ငွေများထိခိုက်ပြီး လူဦးရေအားလုံး အပေါ်လည်း မတည်ငြိမ်ဖြစ်စေကြောင်း TBBC က အစီရင်ခံစာအတွင်း ထောက်ပြထားသည်။
မည်သည့်အရပ်သားကိုမဆို လျို့ဝှက်၍ စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုများရှိပါက နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ ပြည်သူများအပေါ်ရက်ရက်စက် ကျူးလွန်နေသည့်အခြေအနေမျိုးနှင့် အကျိုးဝင်ကြောင်း၊ အရပ်သားကို တိုက်ခိုက်သည်ဆိုရာတွင် စစ်ရေးအရသာမကပဲ အစိုးရ၏ မူဝါဒအောက်၌ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ကျေးကျွန်သဖွယ်ခိုင်းစေခြင်း၊ အဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ မုဒိန်းကျင့်ခြင်း စသည်တို့လည်း အကြုံးဝင်ကြောင်း TBBC က အချက်အလက်နှင့်တကွ ထောက်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရှောင်တိမ်းနေရသူပေါင်း ၄၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိ
NEJ/ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရှောင်တိမ်းနေရသူပေါင်း ၄၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရှောင်တိမ်းနေရသူ အရေအတွက်မှာ စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ ၃၀ ရာနှုန်းဖြင့် အများဆုံးဖြစ်နေသည်ဟု လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံခြားလူမှုရေးအဖွဲ့တခု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တီဘီဘီစီ ခေါ် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ The Thailand Burma Border Consortium ၏ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် Internal Displacement and International Law in Eastern Burma အစီရင်ခံစာတွင် ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရှောင်တိမ်းနေရသူ အရေအတွက်မှာ တီဘီဘီစီလေ့လာထားသည့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၆ ခုရှိ စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ၂၃ ရာနှုန်းရှိပြီး ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အဖျက်ခံရသည့် ကျေးရွာ၊ အရွှေ့ ပြောင်းခံရသည့်ကျေးရွာနှင့် စွန့်ပစ်ခဲ့ရသည့် တီဘီဘီစီလေ့လာထားသည့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၆ ခုရှိ ကျေးရွာစုစုပေါင်းမှာ ၃,၃၈၆ ရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တခုတည်းမှာပင် ရွာပေါင်း ၁၆၀၀ ရှိသည်။
သို့သော် ၁၉၉၆-၂၀၀၂ ကာလအတွင်း အဖျက်ခံရသည့် ကျေးရွာ၊ အရွှေ့ ပြောင်းခံရသည့်ကျေးရွာနှင့် စွန့်ပစ်ခဲ့ရသည့် ကျေးရွာစုစုပေါင်းမှာ ၂၅၃၆ ရှိသော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၁၄၂ ရွာသာရှိတော့သည့်အတွက် ၉၅ ရာနှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။
စင်ပြိုင်အစိုးရ ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေးမည့် ညီလာခံကျင်းပရေး အမ်ပီယူနှင့်အန်စီဂျီယူဘီသဘောထားကွဲ
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (အန်စီဂျီယူဘီ) အား တိုးချဲ့ရေး၊ ပြုပြင်ရေး ဆွေးနွေးမည့် ညီလာခံအား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ (အမ်ပီယူ) က ယခုလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် ကျင်းပလိုသော်လည်း အန်စီဂျီယူဘီက လက်မခံကြောင်း အမ်ပီယူ ဒုဥက္ကဌ ဒေါ်စန်းစန်းက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။ ဒေါ်စန်းစန်းက “ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များညီလာခံကို ၂၀၀၈ ခု ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းက လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း စင်ပြိုင်အစိုးရကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့၊ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ အားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီသဘောထားကို ဆွေးနွေးဖို့ ညီလာခံနောက်ဆက်တွဲ ခေါ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပထမတော့ စင်ပြိုင်အစိုးရက စက်တင်ဘာလ ခေါ်မယ်ပြောပါတယ်။ နောက်တခါကျတော့ အောက်တိုဘာလမှာ ခေါ်နိုင်မယ်ပြောပါတယ်။ ခုကျတော့ နောက်နှစ် ဇန်နာဝါရီမှာ လုပ်မယ်ပြောပါတယ်” ဟုပြောသည်။
အဆိုပါညီလာခံ၌ အန်စီဂျီယူဘီကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်သာမက ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း၌ နအဖစစ်အစိုးရ၏ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် တရားမ၀င်ကြောင်း အမ်ပီယူ၏ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းမှု ကို ကုလသမဂ္ဂက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မညီဟုဆိုကာ လက်မခံခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စန်းစန်းက ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရ၏ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် တရားမ၀င်ကြောင်း တင်သွင်းမှုကို အန်စီဂျီယူဘီမှ ၀န်ကြီးချုပ် (သို့) သမ္မတ (သို့) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတဦးဦးကသာလျှင် တင်နိုင်မည်ဟု အမ်ပီယူက ယူဆကြောင်း ဒေါ်စန်းစန်းက ပြောသည်။ ဒေါ်စန်းစန်းပြောဆိုချက်သည် ကုလသမဂ္ဂ ပုဒ်မ ၇ နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ အန်စီဂျီယူဘီမှ ၀န်ကြီးတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာစန်းအောင်ကို ခေတ်ပြိုင်မှမေးမြန်းရာ အမ်ပီယူ ယူဆချက်မှန်ကြောင်း ဒေါက်တာစန်းအောင်ကပြောသည်။
၄င်းက “ကျနော်တို့က ရှိနေတဲ့အစိုးရကို တိုက်တာ။ အဲဒီတိုင်းပြည်က မြန်မာပြည် စင်ပြိုင် အစိုးရကနေ၊ အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနေ တောင်းလို့ရတယ်။ နောက် တခုက တခြားနိုင်ငံတခုခုကနေလည်း တောင်းဆိုလို့ရ တယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုပဲတင်နိုင်တယ်။ သူပြောတာ ဘောင်ဝင်တာပေါ့” ဟု၎င်းကပြောသည်။
ထိုသို့ဘောင်ဝင်သည်ဟု ဒေါက်တာစန်းအောင်ကပြောသော်လည်း ပထမအကြိမ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းစဉ်က အန်စီဂျီယူဘီလက်မှတ်ထိုးခြင်း အမ်ပီယူနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ မည်သည့်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း ခေတ်ပြိုင်က ဆက်မေးရာ ဒေါက်တာစန်းအောင်က-
“အန်စီယူဘီက စလုပ်တာကိုး။ အန်စီယူဘီနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့က မဟာမိတ်၊ ဆိုတော့ သူတို့လုပ်မယ်ဆိုရင် တော့လုပ်ပေါ့။ သူတို့မှာ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့သုံးသပ်ကြည့်တာက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်။ သူက စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှာ အထွေထွေညီလာခံကို အမီတင်ရတယ်။ အဲဒီတော့ အချိန်အရ လော်ဘီလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ နောက်တခုက Credentials Challenge (ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းမှု) က လောလောဆယ်မှာ အဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၁၀ က အဓိကပြဿနာ။ ၂၀၁၀ နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာကို ကျနော်တို့က တောင်းဆိုတာက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ပေးဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့အထိ အဲဒီသဘောထားပါပဲ” ဟုပြောသည်။
သို့သော် ဒေါ်စန်းစန်းကမူ “ထင်ရှားနေတာကတော့ ၀န်ကြီးချုပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ယခုအခါမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရော ၀န်ကြီးချုပ်ရောက ဒီကိစ္စကို မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးပြောတယ်” ဟုပြောသည်။
ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခြင်းသည် အရှုံးအနိုင်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ နအဖစစ်အစိုးရ၏ မတရားလုပ်ဆောင်ချက်များကို နိုင်ငံတကာမှသိရှိနိုင်စေရန် လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ရှေ့လ ၁၃-၁၄ တွင်ကျင်းပမည့် Credentials ကော်မတီအစည်းအဝေးအမီ ကန့်ကွက်လွှာ ထပ်မံတင်သွင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အမ်ပီယူညီလာခံကို ယခုလနောက်ဆုံး အပတ်တွင် ကျင်းပနိုင်ရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သွားးမည်ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန် အိုင်စီတီပြပွဲကို ကွန်ပြူတာအရောင်းပွဲဟု ပြပွဲလာသူများယူဆ
NEJ/ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်း တပ်မတော်ခန်းမတွင် ယခုလ (၂) ရက်၌ ပြီးစီးသွားသည့် အိုင်စီတီပြပွဲတွင် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည်များကို မတွေ့ရဘဲ လက်ဖ်တော့အရောင်းဆိုင်များသာ များပြားလာကြောင်း ကွန်ပျုတာပညာရှင် လူငယ်တဦးကပြောသည်။
“ ပြပွဲက အိုင်စီတီပြပွဲလို့ နာမည်တပ်ထားပေမယ့် နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတို့၊ ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို မတွေ့ရသလာက်ပဲ၊ အားလုံးက နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေချည်းပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အိုင်စီတီပြပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့် ကွန်ပျုတာအသင်းများ၏ (၁၀) နှစ် မြောက်အဖြစ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ (၆၅) ခုက ပြခန်းပေါင်း (၁၅၆) ခန်း ခင်းကျင်းပြသထားသည်။
အဆိုပါ ပြခန်းများအနက် Sony, Toshiba, MSI, HP, Acer, Dell, Compaq, NEC စသည့်အမှတ်တံဆိပ် မြန်မာနိုင်ငံအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များက ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသည့် လက်ဖ်တော့ အရောင်းပြခန်းများက အများဆုံးဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်မှ စတင်ပြီး (၃) ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြပွဲသို့ လာရောက်ဝယ်ယူသူ ပရိသတ်များဖြင့် စည်ကားနေပြီး အများစုမှာ လူငယ်ပရိသတ်များ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ ပြပွဲတွင် ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းများသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ ၀င်ငွေနှင့် နှိုင်းစာပါက ဈေးကြီးသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း လူအများ ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြကြောင်း အိုင်တီပညာရှင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက“ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိုင်တီအသုံးပြုမှု တွင်ကျယ်ဖို့ဆိုရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းရုံနဲ့ ရမှာမဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးနိုင်မှသာ တိုးတက်မှာဖြစ်တယ်။ အစိုးရက အင်တာနက် သုံးစွဲခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး ဈေးကြီးတဲ့နှုန်းထားတွေနဲ့ ရောင်းနေတာ၊ အင်တာနက်မြန်နှုန်းတွေကို အလွန်အမင်း လျှော့ချထားတာတွေဟာ ပြည်တွင်းအင်တာနက်သုံးစွဲမှုကို ဟန့်တားသလိုဖြစ်ပြီး အိုင်တီကဏ္ဍ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ဘူး” ဟုပြောသည်။
အဆိုပါပြပွဲတွင် အစိုးရထံမှ ကန်ထရိုက်ယူပြီး တဆင့်ခံရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများက ၀ိုင်မက်စ်အင်တာနက်စနစ်နှင့် အိုင်ပီစတား အင်တာနက်စနစ်များကို ရောင်းချကြသည်။
၀ိုင်မက်စ် အင်တာနက်စနစ်သည် ၀ိုင်းဖိုင်စနစ်နှင့် နေအိမ်နှင့်ရုံးခန်းများတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်စေရန် တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းစနစ် တပ်ဆင်လိုသူများသည် အက်ဖ်အီးစီနှင့် ဒေါ်လာ (၂၀၀၀) ကျော် ပေးသွင်းရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြားမြို့နယ်ကျေးရွာများတွင် အင်တာနက်တပ်ဆင်လိုပါက အိုင်ပီစတား အင်တာနက်လိုင်းကို အသုံးပြုရပြီး တပ်ဆင်မည့် စလောင်းအရွယ်အစားကို လိုက်၍ ကျပ် (၅၄) သိန်းမှ (၇၄) သိန်းအထိ ပေးရကြောင်း၊ ယခုရောင်းချနေသည့် အင်တာနက်စနစ် အသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပတ်သက်မှု ကင်းရှင်းကြောင်းကိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးလျှောက်ထားရကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
ကလေးစစ်သား လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အိုင်အယ်လ်အိုက စစ်အစိုးရနှင့် ဖျန်ဖြေ ဆောင်ရွက်ပေးမည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 05 2008 23:00 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ကလေးစစ်သားတဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (ILO) က စစ်အစိုးရနှင့် ဖျန်ဖြေ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကြိုးစားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းရှိ စစ်လေ့ကျင့်ရေး စခန်းတခုတွင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ခံရသည်ဟု ဆိုသော ကလေးစစ်သားတဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံ ပြောကြားမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ILO ဆက်သွယ်ရေးရုံးက အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားပါသည်။ ဤပြောဆိုချက်သည် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ILO ရုံးသို့ တိုင်တန်းခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်တပ်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခြင်း ခံရသည်ဟုဆိုသော အသက်မပြည့်သေးသူ ကလေးတဦးအတွက် ရန်ကုန်ရှိ ILO ရုံးသို့ တိုင်တန်းနိုင်ရန် ယင်းကလေး၏ မိသားစုအား မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ပဲခူးမြို့မှ လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်သူ ဦးအေးမြင့်က အင်္ဂါနေ့က ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
“ကျနော် ဒုတိယတာဝန်ခံ အရာရှိနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရာရှိ အမျိုးသမီးက တိုင်ကြားစာကို လက်ခံထားလိုက်ပြီး၊ သူတို့ ရုံးအနေနဲ့ ဒီကလေး ပြန်ခေါ်နိုင်ဘို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ သူမက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးအေးမြင့်က ILO ဒုတိယ ဆက်ဆံရေးအရာရှိ Piyammal Pichaiwongse နှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ပြောပါသည်။
Mrs. Pichaiwongse သည် အဆိုပါ ကလေးစစ်သားကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွင် သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အမဖြစ်သူ မတင်ဌေးကိုလည်း တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
“သူမ Pichaiwongse က မတင်ဌေးရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို ရေးမှတ်ယူထားပြီး၊ သူ့မောင်ကို အိမ်ပြန်ခေါ်နိုင်ရေး အတွက် သူတို့လုပ်နိုင်တာအားလုံး လုပ်ပေးပါမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်” ဟု ဦးအေးမြင့်က ဆက်လက် ပြောဆိုပါသည်။
သို့သော် သဘောထား ထင်မြင်ချက် ပြောကြားရန်အတွက် ILO ရုံးဆက်ဆံရေးအရာရှိ စတီဗင်မာရှဲလ် (Steven Marshall) ကို ဆက်သွယ်ရာ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါ။
ကလေး၏ အမဖြစ်သူ မတင်ဌေး၏ ပြောကြားချက်အရ စက်ဘီးပေါင်၍ သူ့အမေက ရိုက်လိုက်သည့်အတွက် ဇွန်လတွင် အဆိုပါ သူ့မောင်သည် ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၅ဝ အကွာ ပဲခူးတိုင်း ဖဒိုမြို့ရှိ နေအိမ်မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
“၃ လလောက်ကြာမှ သူတပ်စခန်းတခုမှာ ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ ကျမမောင်ဆီက စာရတယ်” ဟု မတင်ဌေးက မဇ္ဈိမသို့ အစောပိုင်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဤစာရလျှင် မတင်ဌေးနှင့် မိသားစုသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝန်းသိုမြို့နယ် အရာတော်အခြေစိုက် စစ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းရှိရာ ခလရ ၁၁၁ သို့ သူမမောင်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး တပ်မှထွက်ခွင့်ပေးဘို့ အထက်အရာရှိများထံ မေတ္တာရပ်ခံရန် ချက်ချင်း လိုက်သွားခဲ့ကြပါသည်။
သူမ၏မောင် အသက်မပြည့်သေးကြောင်း ကျောင်းသား မှတ်ပုံတင်၊ ကျောင်းမှ ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းနှင့် ရယက ထောက်ခံစာတို့ကို တင်ပြခဲ့သော်လည်း လေ့ကျင့်ရေး တပ်မှ အရာရှိများက တပ်မှ ထွက်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း မတင်ဌေးက ပြောပါသည်။
အထက်အရာရှိများက “လေးလသင်တန်းက ပြီးတော့မှာမို့ သူ တပ်ကထွက်လို့ မရဘူး” ဟု သူတို့ မိသားစုကို ပြန်ပြောခဲ့ကြောင်း မတင်ဌေးက ပြောပါသည်။
ဤသို့တပ်မှ အရာရှိများက တိုတိုပြတ်ပြတ် ငြင်းပယ်လိုက်ပြီးနောက် မတင်ဌေးနှင့် သူမ၏ မိသားစုသည် ILO သို့ တိုင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် ဦးအေးမြင့်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။
“ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်၊ ရယက ရဲစခန်းနဲ့ သူ့ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီက ထောက်ခံစာတွေအပါအဝင် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းတွေ အားလုံးကို ကျနော်တို့ တင်ထားခဲ့ပြီးပြီ” ဟု ဦးအေးမြင့်ကပြောသည်။ ILO ၏ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်မှုအပြီးတွင် ဤကလေး တပ်စခန်းမှ ထွက်ခွါလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု အကောင်းဘက်မှ မျှော်လင့်ကြောင်းဖြင့် သူကပြောပါသည်။
၀န်ကြီးဌာနတခုချင်း သတင်းထုတ်ပြန်မှုကြောင့် မီဒီယာလုပ်ငန်း ကျဉ်းမြောင်းနိုင်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 05 2008 22:52 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခြား ၀န်ကြီးဌာနများသို့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ငယ်များ ဖွဲ့စည်းရန် လျှို့ဝှက် ညွှန်ကြားမှုကြောင့် ပြည်တွင်း မီဒီယာလုပ်ငန်း ပိုမို ကျဉ်းမြောင်းလာနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောဆိုသည်။
အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများမှ ထုတ်ပြန်မည့် သတင်း အချက်အလက်များအား ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်နိုင်ရေးနှင့် ချုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ငယ်များအား ဖွဲ့စည်းရန် လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ်ခန့်က လျှို့ဝှက် ညွှန်ကြားခဲ့သည့်အပေါ် ပြည်တွင်း မီဒီယာ လုပ်ငန်းခွင်များ ပိုမို ကျဉ်းမြောင်းလာစေနိုင်ကြောင်း ပြောဆို သုံးသပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
"ပြည်တွင်း မီဒီယာလုပ်ငန်းတော့ ပိုကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့ သဘောရှိတယ်။ အထက်က ခွင့်ပြုချက်မရရင် သတင်းမီဒီယာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းတွေဆိုရင် ခပ်ရှောင်ရှောင် လုပ်လာမယ်။ နဂိုထက် ပိုကျဉ်းမြောင်းလာမယ်" ဟု ရန်ကုန်ရှိ ၀ါရင့် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အမည်မဖော်လိုသူ အပတ်စဉ်ထုတ် အယ်ဒီတာတဦးကလည်း "အဲလို ဖွဲ့လိုက်တော့ ဌာနဆိုင်ရာအတွင်းမှာ ဒါပြောမယ်၊ ဒါမပြောဘူးဆိုတာမျိုး လုပ်လာမယ်။ သတင်းထိန်ချန်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အရင်ကထက် ပိုဆိုးလာမယ့် သဘောရှိနေတယ်" ဟု ပြောသည်။
ညွှန်ကြားစာများ ပို့ပြီးခဲ့သည်မှာ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ ၀န်ကြီးဌာန ၃ ခုတွင်သာ ဖွဲ့စည်းပြီးစီးသေးကြောင်း ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာလုပ်ငန်းတခုမှ အယ်ဒီတာတဦးကလည်း ယခုလို ပြောသည်။
"၀န်ကြီးဌာနတခုမှာ တာဝန်ခံ ၄-၅ ယောက်ထားမယ်။ ညွှန်မှူးအဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိတွေကို အဲဒီတာဝန်တွေ ပေးထားပြီးတော့ တပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာကို အဲဒီအဖွဲ့တွေက ထိုင်ဆွေးနွေးမယ်။ လိုအပ်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ပြန်ကြားရေးဌာနနဲ့ ညှိပြီးတော့ လုပ်မယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး "အခုဖွဲ့တဲ့ဟာက တပတ်မှာ ဘာလုပ်မယ်။ ဘယ်သူပြောမယ်ဆိုတာမျိုး ခွဲထားလိုက်မယ်။ ဖုန်းနဲ့ပြောရင် သူတို့မဖြေဘူး။ ဌာနကိုလာဖို့ ပြောလိုက်မယ်" ဟု ပြောသည်။
ယခုလို ၀န်ကြီးဌာနများ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဖွဲ့စည်းစေခြင်းသည် မီဒီယာကို မီဒီယာနှင့် တိုက်မည်ဆိုသည့် စစ်အစိုးရ၏ နောက်ဆက်တွဲ ခြေလှမ်းတခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန် မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းများက ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများအတွင်း သတင်းအချက်အလက် ချုပ်ထိမ်းခြင်း၊ အနီးကပ် စုစည်းခြင်းဖြင့် ၀န်ကြီးဌာန ပြောစေချင်သည်များကိုသာ ထုတ်ပြန်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်း ထင်ကြေးပေးကြသည်။
၀ါရင့် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာက "သဘောတရားကို နဲနဲလေ့လာလိုက်တော့ ပြန်ကြားရေးက ပြောခိုင်းတဲ့ ဟာတွေကိုပဲ ပြောမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒီထက်ကလည်း ကျော်လုပ်လို့ မရဘူး။ နောက်တခုက ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဆွဲစုထားတဲ့ သဘောပေါ့" ဟု ပြောသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် စပါးခင်းနှင့် မျိုးစပါးများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 05 2008 18:51 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် မြို့နယ်တချို့တွင် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လယ်သမားများ စိုက်ပျိုးထားသော စပါးခင်း ဧကများစွာ ရေနစ်မြုပ်ကုန်သဖြင့် ပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးနှင့် ပဲခူးတိုင်းရှိ မြို့နယ်တချို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းအတွင်း အဆက်မပြတ် မိုးရွာသွန်းခဲ့ရာ လယ်သမားများ ရိတ်သိမ်းထားသည့် ကောက်လှိုင်းစည်းများ မိုးရေစိုပြီး၊ မရိတ်သိမ်းရသေးသည့် စပါးခင်းများအတွင်း မိုးရေ ၀င်ရောက်သဖြင့် အပျက်အစီးများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
"မိုးက ရွာထားတော့ ရေက မခမ်းဘူး။ စပါးတွေက မှည့်နေပြီ။ နဂိုကတည်းကလည်း အရင်နှစ်တိုင်းထက် လျော့ဖို့ အခြေအနေရှိတယ်။ လျော့ဖို့အခြေအနေ ရှိတဲ့အပြင် အခုလို မိုးလေ၀သ လုပ်လိုက်တော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့" ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ်မှ အမည်မဖော်လိုသူ လယ်သမားတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ဒေသမှ အခြား လယ်သမားတဦးကလည်း ''ကော့မှူးရယ်၊ တွံတေးဘက်တွေရယ်၊ အဲဒီအတိုင်းပဲ။ ကွန်းခြံကုန်းဆို မြုပ်ထွက်သွားတယ်။ စပါးကလည်း ရင့်နေပြီဆိုတော့ အညှောင့်ကလည်း ထွက်လွယ်တာပေါ့။ တော်တော် ဆုံးရှုံးတာပေါ့၊ လယ်သမားတွေ။ ဒီနှစ်ကတော့ အဆုံးရှုံးကြီးတဲ့ လယ်သမားတွေဆို ရှူသာ ရှိုက်သာရုံပဲ ရှိတယ်။ လယ် ၅၀ ဧကလုပ်တဲ့ လူတွေကတော့ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ၊ အကြွေးကို ပခုံးထမ်းနေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်'' ဟု ပြောသည်။
ကော့မှူး၌ နာဂစ်မုန်တိုင်းကျပြီးနောက် စပါးစိုက်လယ်ဧက ၂၁၀၆ ဧကခန့်သာ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ရာ၊ ယခင်က လယ်တဧကလျှင် စပါးတင်း ၅၀ ခန့် ထွက်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် တဧကလျှင် ၃၅ တင်းခန့်သာ ရရှိဖွယ်ရှိသည်ဟု သူက ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
ယခုလ ၂ ရက်နေ့နှင့် ၃ ရက်နေ့များတွင်လည်း ပဲခူးတိုင်း မိုးရွာသွန်းမှု ကြီးမားသဖြင့် အလားတူ ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများကလည်း ပြောသည်။
ပဲခူးမြို့နယ်မှ လယ်သမားကြီး ဦးဖိုးမှီက "မိုးရွာတော့၊ ရေပါလာတော့ စပါးပင်တွေက လဲတာပေါ့။ ရေထိတဲ့ စပါးက ဘယ်နားသွားကောင်းတော့မလဲ။ ဖြစ်နိုင်သလောက်တော့ ကိုယ့်နည်းနဲ့ကိုယ် ကာကွယ်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ်လို့ ကာကွယ်မှုအား နည်းတယ်။ အားနည်းတယ်ဆိုတာက ပဲ ပြန်စိုက်မှာကိုး။ အရင်ရိတ်ပြီးတော့ စပါးအစည်းခေါ်တဲ့ ကောက်လှိုင်းကို တင်ထားတဲ့အခါကျ မိုးများတော့ စပါးအပင်တွေ ပေါက်ကုန်တာပေါ့" ဟု ပြောသည်။
ပဲခူးမြို့ရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် နီးစပ်သူကလည်း ''ရိတ်ပြီးသား လယ်တွေရဲ့ ပျက်စီးနှုန်းဟာ မိုးရွာတဲ့အတွက် ကောက်လှိုင်းတွေ ရေနစ်ကုန်တာ တ၀က်နီးပါးလောက် ရှိလိမ့်မယ်။ ကောက်လှိုင်း မစည်းရသေးတဲ့အခါကျတော့ ရေထဲမှာ စပါးနှံတွေက လဲကုန်တာပေါ့နော်။ တချို့က ရေတွေက တော်ရုံနဲ့ မဆင်းသေးဘူး။ အဲဒါက ပဲခူးမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်အခြမ်းပေါ့နော်။ အဲဒီဘက်မှာ တော်တော်များများ ဖြစ်ကုန်တယ်'' ဟု ပြောသည်။
ပဲခူးအရှေ့ဘက် သနပ်ပင်၊ က၀၊ ဝေါနှင့် ခရမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည်။ သူက ဆက်ပြီး ''ဧကတွေက သောင်းချီသိန်းချီလိမ့်မယ်။ သူက တပြင်လုံး လယ်ကွက်တွေချည်းပဲ'' ဟု ပြောသည်။
ယခုလို မိုးရွာသွန်းမှု များပြားသဖြင့် မည်ရွေ့မည်မျှအထိ စပါးခင်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမည်ကို တိုင်းတာတွက်ချက်ရန် ခက်ခဲသလို၊ အာဏာပိုင်များဘက်ကလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါ။
သို့သော်လည်း စပါးထွက်ရာသီတွင် အောင်မြင်စွာ ထွက်ရှိခဲ့သော လက်ရှိ စပါးများသည် လယ်ကွင်းများအတွင်း ရေနစ်ပျက်စီးမှု၊ ရိတ်သိမ်းကောက်လှိုင်း ရေစိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဆန်စပါးအထွက်နှုန်း လျော့ကျကာ ဆန်ဈေးမှာမူ တက်လာဖွယ်သာရှိသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောဆိုကြသည်။
မေလဆန်းက တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လယ်စိုက်ဧက အများအပြား ပျက်စီးခဲ့ရသလို၊ ရေငံဝင်ရောက်မှုနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အပြည့်အ၀ မလုပ်နိုင်သဖြင့် စိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျခဲ့ရာ မုန်တိုင်းသင့် ဒေသများတွင်လည်း စပါးအထွက်နှုန်းမှာ ကျဆင်းမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
ယခုနှစ် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးမှု နောက်ကျခဲ့သော မြန်မာ့စပါးကျီ ဧရာဝတီတိုင်း အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင်ပါ မိုးများမှာ အချိန်အခါမဟုတ် ရွာသွန်းနေပြန်သည်။
အစိုးရ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနက ပညာပေးလုပ်ငန်းများ လာရောက်လုပ်ကိုင်သော်လည်း ထိရောက်မှု ရှိ၊ မရှိ မသိရသေးပါ။
နာဂစ်ကြောင့် စပါးစိုက်ဧက ၁ ဒဿမ ၉ သန်း (၇၈၃ ၀၀၀ ဟက်တာ) ပျက်စီးခဲ့ပြီး သိုလှောင်ထားသော မျိုးစပါး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ FAO က ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဆန်တန်ချိန် ၆ သိန်း တင်ပို့ရန် မျှော်မှန်းထားရာ ကမ္ဘာ့ဆန်ထွက်နှုန်း၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း FAO ၏ ကိန်းဂဏန်းများက ဆိုသည်။
(ရန်ကုန်မှ မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ပေးပို့သော သတင်းကို သန်းထိုက်ဦးမှ ဖြည့်စွက်ရေးသားသည်။)
ရေကြောင်းအငြင်းပွားလည်း မြန်မာက ဓာတ်ငွေ့ ဆက်ရှာမည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 05 2008 14:46 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုကို ဆက်လုပ်မည်။
ဤအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အရာရှိတဦးကို ကိုးကား၍ အေပီသတင်းဌာနက ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက မြန်မာ ရေပိုင်နက်ထဲမှာ လုပ်နေတာပါ” ဟု မြန်မာအရာရှိက ပြောသည်။
ရေတပ်သင်္ဘောများကို မြန်မာရေပိုင်နက်အတွင်း စေလွှတ်လိုက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို တရားဝင် ကန့်ကွက်ထားကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီးကို နိုင်ငံ၏ မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်သို့ ဆင့်ခေါ်ကာ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းဖြင့် ထိုအရာရှိက ဆက်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ရေပိုင်နက်အတွင်း ရေတပ်သင်္ဘောတွေ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ အရာရှိ ပြောစကားကို ကိုးကားကာ အေပီက ရေးသားသည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေနေမှုများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက တနင်္ဂနွေနေ့က ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက် ဤသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေတပ်သင်္ဘောများ မိမိတို့ ရေပိုင်နက်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လာခဲ့သည်ဟု မြန်မာအစိုးရ၏ ပြောဆိုမှု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာသင်္ဘောများ ဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေနေမှုများကို ကန့်ကွက်သည့်အကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က ယခုလ ၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် နေရာသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်အတွင်း ကျရောက်နေကြောင်း သံအမတ်ကြီးကို ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီပြဿနာကို သံတမန်ရေး နည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းသွားဘို့ ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်သွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ဘို့အတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ် ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားဘို့ လိုပါတယ်” ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အစ်ဖ်တက်ခါ အာမက် ချောင်ဒရီ (Iftekhar Ahmed Chowdhury) က ပြောသည်။
ပင်လယ်နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်း ပြီးစီးသည်အထိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ထားကာ မြန်မာရေယာဉ်များအားလုံး ချက်ချင်း ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားရန်လည်း ဒါကာက မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းဖြင့် ချောင်ဒရီက ဆိုသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေတပ်သည် အဆိုပါ အငြင်းပွားနေသော ဒေသတွင် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုနေကြောင်းဖြင့်လည်း သူက ပြောသည်။
သို့သော် မြန်မာရေယာဉ်များသည် ဘင်္ဂလား ရေပိုင်နက်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဖေသန်းဦးက ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် အမေရိကန်အသံ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း တခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေကို ကျနော်တို့ စီးပွားရေးဇုံအတွင်း လုပ်နေတာပါ” ဟု ဦးဖေသန်းဦးက အမေရိကန်အသံ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်ကို ပြောသည်။
တဖက်နှင့် တဖက် အပြန်အလှန် တောင်းဆို ပြောကြားနေမှုများအပေါ် နှစ်ဖက်လုံးက သဘောမတူကြသေးပါ။
“ကျနော်တို့ ဒီပြဿနာကို သံတမန်ရေး လမ်းကြောင်းကတဆင့် ဆွေးနွေးသွားမှာပါ” ဟု မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ပြောသည်။
နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရေးကိစ္စကို ဒါကာမြို့တွင် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆-၁၇ ရက်နေ့များ၌ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သမတအဖြစ် အိုဘားမား ရွေးချယ်ခံရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 05 2008 13:48 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ၄၄ ဦးမြောက် အမေရိကန် သမတအဖြစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဘားရတ် အိုဘားမားအား ယနေ့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၂၀ အတွင်း လူစိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံး သမတ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် အမေရိကန်သမိုင်း၌ အသက်အငယ်ဆုံးနှင့် ပထမဆုံး လူမဲ သမတအဖြစ် ၄၇ နှစ်အရွယ် အိုဘားမား ရွေးချယ်ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ အထက်လွှတ်တော် (ဆီးနိတ်) အမတ် မစ္စတာ အိုဘားမားသည် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ရီပတ်ပလစ်ကန်ပါတီ ဆီးနိတ်အမတ် ၇၂ နှစ်အရွယ် ဂျွန်မက်ကိန်းကို မဲအရေအတွက် အပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။
ယခု သတင်းပေးပို့ချိန်အထိ မက်ကိန်းက Electoral Votes မဲ ၁၆၃ သာ ရရှိနေချိန်တွင် အိုဘားမားက ၃၃၈ မဲ ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ၅၃၈ မဲရှိသည့်အနက် လိုအပ်မဲ ၂၇၀ ထက် ပိုမိုရရှိခဲ့သည်။ အချို့ပြည်နယ်များတွင် မဲရေတွက်မှုများ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ လူထုဆန္ဒမဲ ကောက်ခံခဲ့ရာတွင်လည်း အိုဘားမားက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။
ယခု ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာ ယမန်နေ့အထိ ၂၁ လတာ ကြာမြင့်ခဲ့၍ အမေရိကန် သမတ ရွေးကောက်ပွဲသမိုင်းတွင် အချိန်အကြာမြင့်ဆုံး မဲဆွယ်ပွဲလည်း ဖြစ်သည်။
အိုဘားမားသည် လာမည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် သမတသစ်အဖြစ် မြို့တော် ၀ါရှင်တန်ရှိ အိမ်ဖြူတော်တွင် စတင်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်။
အမေရိကန် သမတ သက်တမ်းသည် ၄ နှစ် ဖြစ်သည်။
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေတံခါး ပရောဂျက်များ ရပ်ဆိုင်းထားဦးမည်
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 18:31 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ လယ်ယာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော ဆည်မြောင်းနှင့် ရေတံခါး ပရောဂျက်လုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ လက်ရှိအဆင့်၌ပင် ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်သည်။
ဆည်မြောင်းများ၊ ရေထိန်းတံခါးများ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ အကျပ်အတည်းကြောင့် ဆိုင်းငံ့ထားရခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အပြီးမသတ်နိုင်သည့် တည်ဆောက်ဆဲ ပရောဂျက်များကို တည်ဆောက်ဆဲ အဆင့်တွင်ပင် ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟု အဆိုပါ ၀န်ကြီးဌာနအဆိုအရ သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဟုတ်တယ်။ ရန်ပုံငွေက ပြတ်နေလို့ ခဏရပ်ထားရတာ။ သူတို့ ချပေးထားတာက ကုန်နေပြီဆိုတော့လေ" ဟု ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဆည်မြောင်းများ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကြေးကို အစိုးရမှ ချမှတ်ပေးပြီး ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ချမှတ်ပေးထားသော ရံပုံငွေ ကုန်ပြီဖြစ်၍ နောက်ထပ် ရံပုံငွေ ချမှတ်ပေးမည့် အချိန်အထိ ဆောက်လုပ်ဆဲ လုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ်နားထားမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ၂၀၁၄ အထိ လျာထားသော ရေတံခါးနှင့် ဆည်မြောင်းဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ၃၃ ခုရှိနေပြီး လတ်တလော ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ်ရန် လျာထားသော စီမံကိန်းများဖြစ်သည့် ရေထိန်းတံခါး၊ ရေလှောင်တမံနှင့် ရေလွှဲဆည် ၆ ခုကိုမူ ဦးစားပေး၍ အပြီးသတ်မည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြီးရမည်များမှာ ကတောက်ကန ရေထိန်းတံခါး (ကျောက်တန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း)၊ နဂါးပေါက် ရေထိန်းတံခါး (ဝေါမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း)၊ ကျီးချောင်း ရေလှောင်တမံ (ကျောက်တော်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်)၊ လင်ပန်းရေလှောင်တမံ (ကန့်ဘလူ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း)နှင့် ယခုနှစ်အတွင်း၌ ရဲနွယ် ရေလွှဲဆည် (ကျောက်တံခါး၊ ပဲခူးတိုင်း)နှင့် မြို့ကြီး ရေလွှဲဆည် (ရွာငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်) တို့ကို အပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့မှာက ပြည်သူ့လုပ်ငန်း ကြိုတင်ချေးငွေ ဆိုတာရှိတော့ အဲဒါကို တင်ထားတော့ စီမံကိန်းက လုံးဝ ရပ်သွားမှာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ" ဟု အဆိုပါ ၀န်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတဦးက ပြောပြသည်။
သူ၏ အဆိုအရ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဖက်စပ်လုပ်နေသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများမှာမူ ရပ်ဆိုင်းမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆည်မြောင်းများ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အစိုးရမှသာ ချပေးခြင်းဖြစ်သော်လည်း တူးမြောင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်းကိုမူ ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီ တင်ပို့သူများအဖွဲ့ - OPEC က ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ အကူအညီများပေးအပ်ရန် တည်ထောင်ထားသော ရံပုံငွေအဖွဲ့ - OFID မှ ရေရရှိရေးနှင့် မိလ္လာသိမ်းစနစ်အတွက် ရန်ပုံငွေမှ ရန်ပုံငွေ ရရှိခြင်းများ ရှိသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရေရရှိရေးနှင့် မိလ္လာသိမ်းစနစ်အတွက် ကူညီပေးခဲ့သည့် ရန်ပုံငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒဿမ ၂၈ သန်း ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း OFID အဖွဲ့၏ စာရင်းများက ဆိုသည်။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရမှ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေတံခါးများ ရာနှင့်ချီ၍ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သော ဆည်မြောင်း ရေတံခါးပေါင်း ၂၁၆ ခု ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ဆဲမှာ ၃၃ ခု ရှိသည်။
(ရန်ကုန်မှ မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် ပေးပို့သော သတင်းကို ဇာနည်မှ ဖြည့်စွက် ရေးသားထားသည်။)
ပထမဆုံး အာဖရိကနွယ် အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား
အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရက်ပါတီ သမ္မတလောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမား အနိုင်ရလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းကြားတယ်ဆိုရင်ပဲ ညက အိုဘားမား နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ရှီဂါကိုမြို့မှာ သူကိုထောက်ခံတဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ လူအုပ်ကြီးက အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမိုင်းကို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ကာလလို့ အိုဘားမားကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေက ပြောဆိုပါတယ်။ အိုဘားမားကတော့ သူကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းမယ့်အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်မယ့် အပြောင်းအလဲတွေကို အကြမ်းဖျင်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက်တွေရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ အတူ ကိုသိန်းထိုက်ဦးက ဆက်ပြီး တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဘရက်ခ် အိုဘားမား သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ရှီကာကိုနဲ့ တခြားမြို့ကြီးတွေက လမ်းမတွေပေါ်မှာ ညက သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လေးဆယ့်လေးယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး အာဖရိက အနွယ်ဝင် အမေရိကန် လူမျိုးတယောက်ကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ အိုဘားမားက သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကို သူ့ အနိုင်ရလိုက်ကြောင်း လက်ခံတဲ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားပါတယ်။
“တကယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အရာရာတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို သံသယရှိသူတွေ ရှိနေအုံးမယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့သူတွေ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေ ဒီနေ့အထိ ရှင်သန်နေဆဲပါဆိုတာကို မယုံချင်ကြသူတွေ ရှိနေမယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အင်အားကို မေးခွန်းထုတ်သူတွေ ရှိနေအုံးမယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီလူတွေအတွက် ဒီညဟာ အဖြေပေးလိုက်တဲ့ ညပါပဲ။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတ၀ှမ်း ဒီမိုကရက်ပါတီကို မဲပေးခဲ့သူတွေက မနေ့ကညဟာ သမိုင်းဝင် ညတညလို့ ကြွေးကြော်ပြီး လမ်းမတွေပေါ်မှာ စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့က အော်ဟစ်ကခုန်နေခဲ့သလို အိုဘားမားရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ၀မ်းသာ မျက်ရည်ကျသူတွေလည်း အများအပြားတွေ့ရပါတယ်။
သမ္မတအဖြစ် အရွေးခံရဘို့အတွက် သမ္မတလောင်း တယောက်အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ်တွေအားလုံးက ပါဝင်တဲ့ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၂၇၀ ကို ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိုဘားမားဟာ အဓိက အချက်အခြာကျတဲ့ ပြည်နယ်တွေကို အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ ရီပါပလစ်ကန် သမ္မတလောင်း ဂျွန်မက်ကိန်းကလည်း သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ သူရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီဆိုတာ ၀န်ခံတဲ့အကြောင်း အာရီဇိုးနားပြည်နယ် Phoenix မြို့မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ခရီးရှည်အကြီးရဲ့ အဆုံးကို ရောက်ခဲ့ပါပြီလို့ ဂျွန်မက်ကိန်းက သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေကို ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာ သူတို့ ပြောရမယ့် ကိစ္စတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်လေးကပဲ ကျနော် အထက်လွှတ်တော်အမတ် အိုဘားမားကို သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး တန်ဘိုးထားမြတ်နိုးခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နောက် သမ္မတအဖြစ် သူအရွေးချယ်ခံလိုက်ရတာကို ၀မ်းသာတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။”
ကွဲလွဲချက်တွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အခုလို တိုင်းပြည် အခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို အိုဘားမားနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဘို့ သူ့အနေနဲ့ ကတိပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း ဂျွန်မက်ကိန်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဘရက်ခ် အိုဘားမားကလည်း တိုင်းပြည်မှာ ညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်ဘို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်လာမယ်လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့ တချိန်တည်းမှာ ရှေ့မှာ ဆောင်ရွက်စရာတွေ အများကြီးရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒီနေ့ည အခုလို အောင်ပွဲတွေ ကျင်းပနေကြရင်တောင် မနက်ဖြန်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘ၀တသက်တာမှာ အကြီးမားဆုံး ရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျနော်တို့ သိနားလည်ထားပါတယ်။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမြေမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အန္တရယ်ကြီးတဲ့ စစ်ကြီးနှစ်ခုနဲ့ ရာစုနှစ်အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ငွေကြေးအကြပ်အတည်းတွေကို ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။”
ဒီမိုကရက် သမ္မတလောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမား သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလိုက်တဲ့တချိန်တည်းမှာ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်အတွင်းမှာလည်း ဒီိမိုကရက်ပါတီ အမတ် အများစုက အနိုင်ရနေတဲ့အကြောင်း အမေရိကန် သတင်းမီဒီယာ တွေမှာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ အနည်းဆုံး ငါးနေရာကို ဒီမိုကရက်တွေက အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ တချိန်တည်းမှာ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ် ၁၀၀ ထဲက ၃၅ နေရာနဲ့ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ၄၃၅ နေရာကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ညက ရှီဂါကိုမှာ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေကို အခုလို ဆက်ပြော ပါသေးတယ်။
“ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက် ဘို့ အင်အားအသစ်တွေ ရှိရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေ ဖန်တီးရမယ်၊ ကျောင်းတွေ ဆောက်ရမယ်။ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး မဟာမိတ်တွေနဲ့ ပိုပြီးခိုင်မာအောင် လက်တွဲရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးက ရှည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တက်လှမ်းရမှာတွေ မတ်ဆောက်လွန်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပန်းတိုင်ကို တနှစ်ထဲနဲ့ ဒါမှမဟုတ်ရင် သမ္မတသက်တမ်း တခုတည်းမှာတင် ရောက်ချင်မှ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ကို ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျိုး ဒီညလောက် ကျနော် ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ဖူး ပါဘူး။”
ဘရက်ခ် အိုဘားမားက လာမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ မှာ သမ္မတအဖြစ် စတင် တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမိုင်း ၂၃၂ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အာဖရိက အနွယ်ဝင် အမေရိကန် လူမျိုးတယောက်ကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက် ရစ်ပတ်ဗလစ်ကန် ပါတီက အိမ်ဖြူတော်ကို ရှစ်နှစ်ကြာ ကြီးစိုးခဲ့တာတွေ အဆုံးသတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတသစ်အိုဘားမား မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု မြန်မာအတိုက်အခံများ မျှော်လင့်
အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဘာရက်ခ် အိုဘားမား အနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက် ဒါတွေဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာစေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေကြပါသလဲ။ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေရဲ့ အမြင်တွေကို ဦးအောင်လွင်ဦးက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတရွေးပွဲတွေမှာ ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘားရက်ခ် အိုဘားမား က အနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက် ဒါဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ကျိုးပမ်းမှုတွေအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာလိမ့်မယ် ဆိုပြီး ယူဆနကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အဓိကအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တဦးလည်းဖြစ် ၀ါရင့်သတင်းစာ ဆရာကြီး တဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ အမြင်ကတော့ ဒီလိုပါ။
“မစ္စတာ အိုဘားမားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်မှာပဲလို့ ကျွန်တော်တော့ ယုံကြည်တယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မသိသော်လည်း သူ့ပါတီရဲ့ အစဉ်အလာကို ကျွန်တော်သိတယ်။ အဲဒီအစဉ်အလာကို မစ္စတာ အိုဘားမားက တော့ ကိုင်စွဲမှာပဲ။ ဒီမိုကရေစီအစဉ်အလာပေါ်မှာရပ်တည်ပြီး ဗမာပြည်ရဲ့အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေအနေတွေ၊ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့ သဘောထားတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ အဆိုပြုချက်တွေ၊ အရေးယူမှုတွေကို ဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။ လုပ်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဒီလို အာဖရိကန်နွယ်ဖွား လူမည်းတယောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့ သမ္မတ ဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အတွက် သမိုင်းဝင် ဖြစ်ရပ်တခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါဟာလည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အင်အားစုတွေအတွက် အားကျစရာ ဖြစ်နေရတာပါ။ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်စင်တာမှာ ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်တွေကို စိတ်ဝင်တစား သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင် ကတော့ -
“လူမဲတယောက်ကနေပြီး အမေရိကန် သမ္မတ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ တချိန်တုန်းက ဆိုရင်တော့ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပဲလို့ ပြောစရာရှိပေမယ့် ဒီနေ့ ဒါကို လက်တွေ့အနေနဲ့ သက်သေထူလိုက်ပြီလို့ ပြောနိုင်တယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ ဒီမိုကရေစီ အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။ တကယ်တော့ အသားအရောင် ကွဲပြားနေ ပေမယ့်လည်း သူတို့က လူတယောက်အပေါ်မှာ အရည်အချင်းအရ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အမြင့်ဆုံး ရာထူး အဖြစ် သမ္မတကိုတောင် ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာမှာ အမေရိကန်ကို ချီးကျူးထိုက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”
ဒီလိုပဲ ရန်ကုန်မြို့က မြန်မာသံအမတ်ကြီးဟောင်း တဦးလည်းဖြစ်၊ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ သခင်ချန်ထွန်း ကလည်း ဒါဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ကျိုးပမ်းသူတွေအတွက် အားကျစရာ အတုယူစရာ တခုလို့ မြင်ပါတယ်။
“ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးကို ကြိုးစားအားထုတ် နေတဲ့သူတွေအတွက် အင်မတန် ကြီးမားတဲ့ အင်အားကြီးတရပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါပဲ ဆိုတာ ကမ္ဘာကို ပြလိုက်တာပဲ။ ဗမာပြည်ကလည်း ကိုယ်က ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့နိုင်ငံက ဒီလိုမျိုး လုပ်ကိုင်ချင်တယ်၊ ဒီလိုမျိုး ဒီမိုကရေစီလိုလားလာကြတာပေါ့။”
တကယ်တော့ အမေရိကန် သမ္မတ နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂ ဦး ဖြစ်ကြတဲ့ ဒီမိုကရက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဘာရက်ခ် အိုဘားမား ထက် ရီပတ်ဘလစ်ကန် ကိုယ်စားလှယ် ဂျွန် မက်ကိန်း ကသာ မြန်မာ့အရေး စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိခဲ့တယ်၊ ပိုမိုတက်ကြွတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒမျိုး ရှိတယ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီရေး လိုလားသူတွေက ပိုမိုနှစ်ခြိုက်မှုတွေလည်း ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လို့ အခုလို ဂျွန် မက်ကိန်း ရှုံးနိမ့်သွားပေမယ့်လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး စွမ်းဆောင်ချက်တွေ လျော့သွားစေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ယုံကြည် ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အိုဘားမားဟာ ဒီမိုကရေက်တစ်ပါတီရဲ့ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရပ်တည်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သဘောထားတွေ၊ အစဉ်အလာတွေကို ဆက်ပြီး ကိုင်တွယ်ရမယ့် ၀တ္တရားက ရှိနေတယ်။ မစ္စတာ အိုဘားမားက ပျော့ပြောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ကျန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တင်းမာတဲ့ အယူအဆတွေ၊ ခိုင်မာတဲ့ အယူအဆတွေ ရှိကောင်းမှ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော သူမလွဲမသေ ကိုင်စွဲရမယ့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး အစဉ်အလာကတော့ အလွန်ကြီးမားတယ်လို့ ယုံပါတယ်။ အဲဒီလို ယုံတဲ့အတွက်လည်း ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး သမားအိုကြီးတွေတောင်မှ ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နိုင်သေးတာ သူလို လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှ ခိုင်ခိုင်မာမာ မရပ်တည်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်း ပြေပြစ်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ သဘောတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို အတင်း အဓမ္မကြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ပြေပြေပြစ်ပြစ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလဲ ဆောင်ရွက်တာပဲ လိုချင်တာ။ ကျွန်တော်တို့ အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုသာ လိုချင်တာ။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုမှာ ထိရောက်တဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်။”
အတိုက်အခံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တဦးလည်းဖြစ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့တဲံ ဦးဝင်းတင် ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးပွဲတွေကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက သမ္မတရွေးပွဲတွေ အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးအပေါ် ထင်ဟပ်လာဖွယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောပြခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။
အိုဘားမား သမ္မတ ရွေးချယ်ခံရမှုအပေါ် ကမ္ဘာတ၀န်း ကြိုဆို
အိုးဘားမား တက်ခဲ့ဖူးသော အင်ဒိုနီးရှား ကျောင်းမှ ကျောင်းသားများ အိုဘားမား အောင်မြင်မှုကို ၀မ်းသာနေပုံ(၅ရက် ၁၁လ ၂၀၀၈)
အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘရက်ခ် အိုဘားမားအနိုင်ရလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေက ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြပြီး ဒါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာရော ကမ္ဘာအတွက်ပါ ပြည်သူတွေအတွက် အားသစ်တရပ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လာမယ့် အမေရိကန် သမ္မတသစ်အတွက် အရေးပါတဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တွေ ရှိနေတဲ့ ဒီဒေသတွင်းမှာ အခု အမေရိကန်သမ္မတသစ်အပေါ် ဘယ်လိုများ တုန့်ပြန် သဘောထားတွေရှိသလဲဆိုတာ ကဘူးမြို့ကနေ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ဘယ်ရီ နယူးဟောက်သတင်းပေးပို့ထားတာ အပြည့်အစုံ ကိုသားညွန့်ဦးက ပြောပြပါမယ်။
အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ အခုလို မစ္စတာ အိုဘားမား အနိုင်ရလိုက်တာကြောင့် အမေရိကန်မှာရော ကမ္ဘာ နိုင်ငံရေးမှာပါ အကြောင်းရပ်တခုလိုဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေးကိစ္စတွေဟာ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အခြေအနေအသစ်တရပ် ရောက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း အာဖဂန်သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်းက ပြောပါတယ်။ မစ္စတာ အိုဘားမားရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဟာ အာဖဂန်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအပေါ် မျှော်လင့်ချက်အတော်ကြီးရှိတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
“အခု ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ သမ္မတအိုဘားမားဖြစ်လာပြီးဆိုရင် အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘ၀ အာဖဂန် နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး အပြင် ကမ္ဘာအတွက်ပါ အလားအလာကောင်းတွေ ရှိလာမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။”
အိန္ဒိယဖက်ကလည်း အိနိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်းမိုဟန် ဆင်းက ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး အမေရိကန် အိန္ဒိယ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြင့်လာမယ်မျှော်လင့်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူက အခုလို ဖတ်ပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့နှစ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ တိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းရပ်တွေ စိန်ခေါ်ချက်တွေကို အတူတကွ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။”
အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်အကြား အငြင်းပွားနေတဲ့ ကက်ရ်ှမီးယားပြဿနာကို ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ရင် ပါကစ္စတန်အနေနဲ့ အယ်ကိုင်းဒါးနဲ့ တာလီဘန် စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ပိုပြီး အလေးထား လာနိုင်မယ်လို့ မစ္စတာ အိုဘားမားက ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဟူမာရန် ခန်းကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု စစ်ဆင်ရေး အပေါ် ခံစားချက်မကောင်းတဲ့ ပါကစ္စတန်က အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောထားအချို့ နည်းပါးသွားစေမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အိုဘားမားဟာ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ အရှုပ်အထွေးတွေ အားလုံးကို နားလည်အောင် ကြိုးစားမယ့် လူလို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။ ဒါကြောင့် ပါကစ္စတန်တွေရဲ့ ခံစားမှုကို နားထောင်နိုင်ပြီး၊ အခြေအနေတွေ ကောင်းလာလိမ့် မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။”
အခုလို အမေရိကန် သမ္မတသစ်အဖြစ် မစ္စတာအိုဘားမား ရွေးခြယ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ အမေရိကန်ပုံရိပ် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အပေါ် အမြင်ဆိုးနေကြတာတွေ ပြောင်းလဲလာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ အမေရိကန် ဂျော့ဂ်ျတောင်း တက္ကသိုလ်က ကိုမင်းဇော်ဦးကလည်း ယူဆထားပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာက အမေရိကန် ကို မြင်နေတဲ့ အမြင်တွေဟာ ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေ ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ သံတမန် ဆက်ဆံရေးတွေ ပိုပြီး ချောမွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တဇွတ်ထိုး ၀ါဒတွေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ကို ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပေါ်လစီတွေနဲ့ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မူကို လက်ကိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။”
အမေရိကန်က အခုလို ပြောင်းလဲလို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျဉ်းက ပြောင်းလဲလာတာ မဟုတ်တာတောင်မှ တစုံတရာ ရွေ့လာနိုင်သလား။
“ရွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာပြည်လို ကိစ္စမျိုးမှာ အမေရိကန်က သူ့ရဲ့ ပေါ်လစီကိုပဲ ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ ဟာကိုပဲ လုပ်ကိုင်ထားပြီးတော့ အာစီယံနဲ့ တွေ့ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊ တရုတ်နဲ့ တွေ့ပြီး လုပ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ သူ့ပေါ်လစီပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီး တောက်လျောက်ရပ်တည်သွားတယ်။ အိုဘားမား လက်ထက်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုရင် ဗမာပြည်လို ကိစ္စမျိုး၊ ဒါဖားလို့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ တခြား အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ အခါ အမေရိကန်ဘက်က ပိုပြီး ပျော့ပျော့ ပြောင်းပြောင်း ဆက်ဆံလာနိုင်တယ်။”
အမေရိကန် နိုင်ငံ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဒီမိုကရက် သမ္မတလောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမား ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် အာရှ နဲ့ အာဖရိက အပါအ၀င် ကမ္ဘာတ၀န်း မှာ လူတွေ စုရုံး ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။
အာရှ မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည် အများစု က အမေရိကန် နဲ့ တော်တော်ကြီး ဆက်စပ်နေပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန် နဲ့ သြစတြေးလျလို တိုင်းပြည်တော်တော်များများ က စစ်ရေး မဟာမိတ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံ အားလုံး နီးနီးလောက် ဟာ အမေရိကန် နဲ့ စီးပွားရေးအရ ရင်းရင်းနှီးနှီး အဆက်အသွယ် ရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး က အားနည်း လာပြီး အီရတ် စစ်ပွဲက တာရှည်လာတဲ့အခါ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအပေါ် အားလုံးက မျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ မစ္စတာအိုဘားမားဟာ ပထမဆုံး အာဖရိကနွယ် အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် ရွေးခြယ်ခံလိုက်ရတာပါ။
တရားရုံးတွင် အမှုသည်များကိုယ်တိုင် လျှောက်လဲချက်ပေးနေရ
ရိုးမ ၃။ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈
တရားရုံးတွင် ရှေ့နေများ လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် စွပ်စွဲခံရသည့်အမှုသည်များမှာ ကိုယ်တိုင် လျှောက်လဲချက်ပေးနေရသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ဦးမြင့်အေး၊ ကိုရန်ရွှေနှင့် ကိုဇော်ဇော်အောင် တို့အား ပုဒ်မ (၁၇/၁) နှင့် (၁၃/၅) တို့ဖြင့် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာတွင် ရှေ့နေများ လာရောက်နိုင် ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကိုယ်တိုင် လျှောက်လဲခဲ့ရသည်။
“စွပ်စွဲခံရတဲ့သူတွေမှာ ရှေ့နေတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်၊ ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ရှိန်ကလဲ မလာဖြစ်ဘူး၊ မနက်ဖန် သူက ဗဟိုတရားရုံးမှာ ထုချေစရာရှိတယ်၊ လူငယ် စောကျော်ကျော်မင်း နဲ့ တခြားရှေ့နေတွေ တယောက်မှမလာဖြစ်လို့”ဟု လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူ ကိုမောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
အမှုစစ်ဆေးရာတွင် တရားလိုများဘက်မှ လိုပြသက်သေအဖြစ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၆) ဦးခန့် လာရောက်ကာ ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းနှင့် ဦးမြင့်အေးတို့မှာ တဦးချင်း ကိုယ်တိုင် လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ရကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“ခင်ဗျားတို့ အခုပြောနေတာတွေက စွပ်စွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေ မှာ ပတ်သက်ခြင်း၊ သိရှိခြင်း၊ တစုံတရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ဦးမြင့်အေးက ကိုယ်တိုင်လျှောက်လဲခဲ့တယ်၊ ဇော်ဇော်အောင်ကတော့ စစ်ကြောရေးမှာ (၅) ရက်နဲ့ (၅) ည မအိပ်ရဘဲ အရိုက်ခံရလို့ မခံနိုင်တော့လို့သာ သူတို့လိုချင်တာကို ခေါင်းညိတ်ပေးလိုက်တာလို့ ပြောတယ်”ဟု ကိုမောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
၎င်းတို့အား ရုံးထုတ်ရာတွင် မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ယခုစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တုန်လှုပ်မှုတစုံတရာမရှိကြောင်း ဦးမြင့်အေးကပြောဆိုသည်ဟု ကိုမောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
“ဦးမြင့်အေးက ဒါတွေကစွပ်စွဲတာတွေပဲ၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ကိုယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဘာမှ သိပ်တုန်လှုပ်လှုပ်ခြောက်ခြားမှု မရှိပါဘူးဆိုပြီး ပြောတယ်”ဟု ပြောသည်။
အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးက ဦးမြင့်အေးတို့အမှုအား လာမည့် (၁၃) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံချိန်းဆို လိုက်သော်လည်း အမှုသည်များဘက်မှ ရှေ့နေများလိုက်ပါနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုမူ မသိရသေး ကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
အိုဘားမား အောင်ပွဲခံကြောင်း မက်ကိန်းကြေညာ
အောက်တိုဘာ ၅။ အေပီ
အိုဘားမား အနိုင်ရကြောင်း ကြေညာနေသော မက်ကိန်းနှင့် ဘေးမှ ရပ်နေသော ဒုသမ္မတလောင်း ပြိုင်ပွဲဝင် ဆာရာပေါ်လင်း
ရီပတ်ဘလစ်ကန် သမ္မတလောင်း ဂျွန်မက်ကိန်းသည် ဒီမိုကရက် သမ္မတလောင်း ဘားရက် အိုဘားမားကို အနိုင်ပေးလိုက်ပြီး အိုဘားမားသည် သူကိုယ်တိုင်နှင့် သူ့တိုင်းပြည်အတွက် ကြီးမြတ်သော အရာတစ်ခုကို ရရှိလိုက်ကြောင်း ထောပနာပြုလိုက်သည်။
ဇနီးသည် စဲန်ဒီနှင့် ဒုသမ္မတလောင်းအဖြစ် တွဲဖက်ဲအရွေးခံသူ ဆာရာပေါ်လင်းတို့ ခြံရံလျက် အရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ ဖီးနစ်မြို့ ဘဲလ်တီမိုး ဟိုတယ်အပြင်မှနေ၍ မက်ကိန်းသည် ထောက်ခံသူများအား ည ၉ နာရီကျော်တွင် စကားပြောကြားသည်။ “အမေရိကန် ပြည်သူတွေက ပြောလိုက်ကြပါပြီ။ သူတို့ဟာ သဲသဲကွဲကွဲ ပြောလိုက်ကြပါပြီ”ဟု ဆိုသည်။
အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသများတွင် မဲဆန္ဒပေးခြင်း အပြီးသတ်ပြီးနောက် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အိုဘားမား၏ မဲများ ရေတွက်ပြီးနောက် အောင်မြင်ကြောင်း ထင်ရှားပြီးနောက် ပြိုင်ပွဲကို မက်ကိန်းက အိုဘားမား အနိုင်ရကြောင်း ပြောကြားပြီး အဆုံးသတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မက်ကိန်းက သူ့အား ထောက်ခံသူများကို မကျေနပ်စရာတချို့ ခံစားရတာ သဘာဝပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ခံစားရပေမယ့် အရေးနိမ့်ခြင်းဟာ ကျွန်တော့် အရေးနိမ့်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အရေးနိမ့်တာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု နှစ်သိမ့်သည်။ ရွေးချယ်ခံ သမ္မတ အိုဘားမားကို ကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း မက်ကိန်းက ကတိပြုသည်။
မဲဆွယ်ကာလအတွင်း မက်ကိန်းက အိုဘားမားအား သမ္မတဖြစ်ရန် အတွေ့အကြုံ နည်းပါးလွန်းသူအဖြစ် ဝေဖန်ခဲံသော်လည်း ယခု အရီဇိုးနား အထက်လွှတ်တော်အမတ် မက်ကိန်းသည် ရှည်လျားခက်ခဲလှတဲ့ ရှည်လျားခက်ခဲတဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သူ့အစွမ်းသတ္တိနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရည်ကို လေးစားမိစေပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
ဒီမိုကရက် ပါတီတွင်း ဆန်ခါတင် သမ္မတလောင်း ပြိုင်ပွဲတွင် အိုဘားမားသည် သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်၏ ဇနီးဖြစ်သူ အမျိုးသမီး ပရိသတ်၏ ထောက်ခံမဲများ ရရှိထားသော အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဟီလာရီ ကလင်တန်ကို အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ဟီလာရီ နောက်ဆုတ်သွားပြီး ဒီမိုကရက် သမ္မတလောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မဲဆွယ်ကာလအတွင်းတွင်လည်း အတွေ့အကြုံ နည်းပါးမှု၊ ဘာသာရေး စွပ်စွဲမှု စသော ဝေဖန်မှုများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
မွန်စာပေကို လွတ်လပ်စွာ သင်ကြားခွင့်မရှိ
Wed 05 Nov 2008, မင်းအာသံ၊ မိကျလွန်းထော
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ဂျိုင်းမြစ်ဒေသအတွင်းရှိ မြန်မာအစိုးရ စာသင်ကျောင်းများတွင် အစိုးရကအတန်းချိန်မှာ မွန်စာပေသင်ကြားခွင့်မပေးခြင်းကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုပညာရေးဌာနမှ ပညာသင်နှစ် ၂၀၀၈-၀၉ မှစတင်၍ မြန်မာအစိုးရ ကျောင်းတွင် မွန်စာပေသင်ကြားရေးကို ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။ သို့သော် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ရသည့် ကျောင်းများတွင် မွန်စာပေကိုဆက်လက်သင်ကြားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
''မွန်ကျေးရွာတိုင်း အတန်းချိန်မှာ မွန်စာပေသင်ကြားခွင့် မရရင် ဆက်မသင်ပါနှင့်လို့ ကျမတို့ချမှတ်ထားတာရှိတယ်'' ဟု ဗဟို ကော်မတီဝင် မိစာဍာ (မွန်ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ) ကပြောပြသည်။
အစိုးရစာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများက မွန်စာပေသင်ခွင့်ပေးခဲ့လျှင် ၄င်းတို့အနေနှင့် အစိုးရကျောင်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပြီး အကယ်၍ အတန်းချိန်အတွင်း မွန်စာပေသင်ကြားနေခိုက် မြို့နယ်ပညာရေးမှုး ရောက်ရှိလာပါက ကျောင်းအုပ်ကြီးများ အပြစ်တင်ခံရဖွယ်ရှိသည် ဟု မွန်ပညာရေးဌာနမှ ဆက်ပြောပြသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်ပညာရေးမှုးများက ကရင်ပြည်နယ်တွင်ရှိသော မွန်ကျေးရွာများ၌ မွန်စာပေ ပပျောက်အောင် ဖိအားပေးလျှက်ရှိပြီး မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေးမှုးများလည်း မွန်စာပေ ပပျောက်အောင် တွန်းအားပေးလျှက်ရှိသည်။
မြန်မာအစိုးရစာသင်ကျောင်းရှိ မွန်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများမှာ မွန်စာပေများကို သင်ကြား ရန်နှင့် အလေးထားရန် အချိန်မပေးနိုင်ကြပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျူရှင်တက်နေရခြင်း၊ အချိန်ပိုတက်နေရခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု မွန်ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ မိစာဍာက်ပြောသည်။
''မြန်မာအစိုးရစာသင်ကျောင်းအတန်းချိန်မှာ မွန်စာပေသင်ကြားနေရပေမယ့် မြန်မာအစိုးရက သင်ကြားခွင့်ဥပဒေကို တိတိကျကျပြဌာန်းထားတာမရှိပါဘူး၊ အစိုးရဆီက သင်ကြားခွင့်မရပေမယ့် ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး မွန်စာသင်ကြားနေကြတယ်'' ဟု မိစာဍာက ပြောပြသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ကျိုက်မရောမြို့နယ်နှင့် ဂျိုင်းမြစ်ဒေသ အတွင်းရှိ ကျေးရွာအများစုသည် စုပေါင်းကျောင်းတွင် မွန်စာပေကိုသင်ကြားခဲ့ကြသည်။ (၁၁) နှစ်တိုင် အစိုးရကျောင်းအတွင်းတွင် မွန်စာပေကိုသင်ကြားခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၆ မှစ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာစစ်အစိုးရက မွန်စာပေသင်ကြားခွင့်အပေါ် အကြပ်ကိုင်လာခြင်းကြောင့် စုပေါင်းကျောင်းမှ တွဲဖက်ကျောင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီး မွန်စာပေကို ကျောင်းပြင်ပအချိန်၌သာ သင်ကြားခဲ့ရသည်ဟု အဝေးရောက်မွန်ကျောင်းဆရာဟောင်းတစ်ယောက်က ပြောသည်။
စုပေါင်းကျောင်းဆိုသည်မှာ မြန်မာအစိုးရကျောင်း အတန်းချိန်အတွင်းတွင် မွန်စာပေသင်ကြားခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပြီး တွဲဖက်ကျောင်းမှာ ကျောင်းပြင်ပချိန်တွင် သင်ကြားခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က မွန်ဘာသာ တစ်ဘာသာကို ကျောင်းချိန်အတွင်းတွင် သင်ကြားခွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မွန်ပြည်နယ်ပညာရေးဌာနက သင်ကြားခွင့်မပေးခဲ့ပေ၊ ၁၉၉၆-၉၇ ခုနှစ်အကြားတွင် မွန်အဖွဲ့အစည်းမှ မွန်စာသင်ကျောင်းများ တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရတို့က အမျိုးမျိုးစွပ်စွဲကာ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့သည်။
မွန်ပညာရေးဌာနမှ စရင်းကိုင်ဆရာတစ်ယောက်၏ ပြောပြချက်အရ ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတွင် စုပေါင်းကျောင်း (၃၁) ကျောင်းရှိပြီး၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်တွင် စုပေါင်းကျောင်း (၁၄)ကျောင်း နှင့် မွန်အမျိုးသားကျောင်း (၆) ကျောင်း စုစုပေါင်း (၅၁) ကျောင်းရှိသည်။
ကျိုက်မရောမြို့နယ်နှင့် ဂျိုင်းမြစ်ဒေသ အားလုံးတို့တွင် အချိန် (၁း၃၀) နာရီမျှသာ မွန်စာပေ သင်ကြားခွင့် ရရှိကြသည်ဟုဆိုသည်။
သထုံခရိုင်မှလွဲ၍ ထားဝယ်ခရိုင်နှင့် မော်လမြိုင်ခရိုင် (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ) တို့တွင် အစိုးရကျောင်းအတန်းချိန်တွင် မွန်စာပေကို သင်ကြားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရစာသင်ကျောင်းများတွင် မူလတန်းအဆင့် မွန်စာပေများကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန် မွန်ပညာရေးဌာန ဆက်လက်ကြိုးစားလျှက်ရှိကြောင်း ဗဟိုကော်မတီ မိစာဍာ(မွန်ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ) က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် မွန်အမျိုးသားကျောင်း စုစုပေါင်း (၂၀၀) ကျောင်းရှိ၍ ၄င်းတို့အထဲတွင် အထက်တန်းကျောင်း (၃)ကျောင်းရှိသည်။ မွန်ဒေသများတွင် မြန်မာအစိုးရက ချမှတ်ထားသည့်ဥပဒေဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ထောက်ပံ့ငွေအနည်း ငယ်ဖြင့် စာပေသင်ကြားနေကြသော ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ ပေါင်း (၉၀၀) နီးပါးမျှ ရှိသည်။
တရားမဝင် လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် လိုင်စင်သက်တမ်း တစ်လထပ်တိုး
Wed 05 Nov 2008, ရိုင်မရော့
တရားမဝင် လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် လိုင်စင်လုပ်သက်တမ်းကို အောက်တိုဘာလကုန်အထိသာ ပြုလုပ်ပေးသည်ဟု ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တချို့တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးနေသည် ဟု လိုင်စင်လုပ်သူ အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
''လိုင်စင်လုပ်တာက နောက်ထပ် ၁ လ ထပ်တိုးထားတယ်၊ အရင်က ကညန (ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန) တွေ သတ်မှတ်ထားတာက ၄ လ အတွင်း လိုင်စင်လုပ်ပေးမယ်၊ ၄ လပြည့်သွားပြီးရင် လိုင်စင်မဲ့တွေကို အရင်လိုပဲ ဖမ်းချင်ဖမ်းမယ်'' ဟု မြဝတီမြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြဝတီမြို့ခံ၏ ပြောပြချက်အရ လိုင်စင်လုပ်ရာတွင် ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားနှင် ဆိုင်ကယ် (Model) တည်ပြီး လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားမှုရှိရာ အနည်းဆုံး ၃ သိန်းလောက်ကုန်ကျသည်။ အရင်က ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ယခု နောက်ထပ် ၁ လ ထပ်တိုးလိုက်သည့်ကာလအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်က အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
လိုင်စင်လုပ်သူများအတွက် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှလ၍ သွားရောက်လုပ်နိုင်ပြီး တစ်နေ့လျှင် ဆိုင်ကယ်အစီးးရေ ၅၀၀ ကျော်ပြုလုပ်ပေးနေသည်။ နောက်ထပ် ၁ လသာ ကျန်တော့သည့်အတွက် လိုင်စင်လုပ်သူများပြားသည်ဟု ၄င်းမြဝတီမြို့ခံက ပြောသည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့ပေါ်ရှိ လွန်ခဲ့သည့်လက လိုင်စင်လုပ်ခဲ့သည် ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ ဝန်ထမ်းများကို အရင်လုပ်ပေးသော်လည်း အချို့ မစောင့်နိုင်သူများမှာ မော်လမြိုင်မြို့သို့ သွားရောက်လုပ်ကြသည်။ ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်သွားလုပ်သည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ၂ သိန်းနဲ့ ၇ သောင်းကျပ်သာကုန်ကျပြီး ပွဲစားများမှတဆင့်ပြုလုပ်ပါက ၃ သိန်းကျော်မျှ ကုန်သည်။
နောက်တစ်လ ထပ်တိုးလိုက်သည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်လုပ်သူများသည် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်လုပ်ရသည်ဟု မုဒုံမြို့နယ်အတွင်း လိုင်စင်လုပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေးမြို့ခံတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ ''ဒီနိုဝင်ဘာလဆန်း ၃ ရက်နေ့မှာ ရေးမြို့ပေါ်က ရပ်ကွက်ဥက္ကဌတွေက ရပ်ကွက်အလိုက် လိုင်စင်လုပ်တဲ့ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်စာရင်းတွေကို လိုက်ကောက်နေတယ်။ ဆိုင်ကယ်အရေအတွက်များရင် ရေးမှာ လာလုပ်ပေးမယ်၊ တကယ်လို့ အရေအတွက် နည်းမယ်ဆိုရင် မော်လမြိုင်မှာ သွားလုပ်ရမယ်၊ ဒီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကြတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ အရင်ကနဲ့ အတူတူပဲ၊ (wave 100) ဆိုရင် ၂ သိန်းနီးပါး၊ (wave 125) ၂ သိန်းနဲ့ ၄ သောင်း၊ နောက်ဆုံး (Model) ဆိုရင် ၂ သိန်း ၇ သောင်း ကုန်တယ်'' ဟု ၄င်းက ကပြောသည်။
''လိုင်စင်လုပ်တာ တစ်လ ထပ်တိုးပေးမယ်ကြားလို့ ဆိုင်ကယ်ပွဲစားတွေ ဆိုင်ကယ်လာဝယ်တာများလာတယ်၊ တနေ့ကို ဆိုင်ကယ် ၁၀ စီး၊ အစီး ၂၀ လောက် လာဝယ်နေတယ်'' ဟု ဘုရားသုံးဆုမှ ဆိုင်ကယ်ပွဲစားနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သည့် (weekly eleven) သတင်းဂျာနယ်၏ ဖော်ပြချက်အရ တရားမဝင် လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် လိုင်စင်လုပ်ပေးသည့် ကာလသက်တမ်းကို သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်တွင် ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှစ၍ တရားမဝင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို လိုင်စင်လုပ်ပေးပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်၌ လိုင်စင်လုပ်ပေးခြင်းကို ခေတ္တခဏရပ်ဆိုင်းထားကာ သထုံ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဘက်သို့ သွားရောက်လုပ်ပေးနေသည်။
တရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် လိုင်စင်ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က ဓာတ်ဆီထုတ်ရန် စာအုပ်နှင့်တကွ ကုန်ကျစရိတ် တစ်သိန်းနှင့် တစ်သိန်းခွဲအကြာ ပေးရကာ၊ ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရာတွင် ဓာတ်ဆီထုတ်ရန် စာအုပ်များကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ လိုင်စင်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်သည် ဆိုင်ကယ် (Model) ပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားမှုရှိသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် ၃ သိန်းကျော်ရှိပြီး၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထုတ် ဆိုင်ကယ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် ၂ သိန်းနှင့် ၃ သိန်းကြားပေးရသည်။
ဘုရားသုံးဆူတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် လောင်းကစားသူ များပြားလာ
Tue 04 Nov 2008, ကွန်းဟဒေ့
ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ပ်ိတ်ခြင်းနှင့်အတူ လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်အကိုင်များရှားပါးလာမှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများသည် လောင်းကစားများကို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
"လူတွေက အလုပ်မရှိတော့ အာရုံလွင့်နေတယ်၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ စိတ်ကကျဉ်းကြပ်တော့ ဒါလေးတွေလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလားဆိုပြီး စပြီးလောင်းကစားကြတော့တာပဲ" ဟု ဘုရားသုံးဆူမြို့သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
လောင်းကစားများကို လောင်းကစားကြသူများသည် အများစုမှာ အလုပ်မရှိသောသူများ ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ဘုရားသုံးဆူမြို့အတွင်း အဓိကတွင်ကျယ်စွာ လောင်းကစားကြသော လောင်းကစားနည်းတစ်မျိုးမှာ ပန်းသီးပုံးဂိမ်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ ပန်းသီးပုံးဂိမ်းသည် ယောက်ျားမိန်းမ ကလေးလူကြီးမရွေး ကစားနိုင်သည့် ဂိမ်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေးလူကြီး၊ ကျောင်းသားများပါမကျန် ပန်းသီးပုံးဂိမ်းကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကစားလာကြသည်။
ထိုလောင်းကစားဝိုင်းများအားလုံးကို ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များက ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ပန်းသီးပုံးဂိမ်းများကို လောင်းကစားသူများသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာသောကြောင့် ယခုအခါတွင် ပန်းသီးပုံးဂိမ်းပေါင်း ၃၅၀ ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ဤလောင်းကစားဒဏ်ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများဆုံးရှုံးကာ ဘဝပျက်သွားသောသူများ အများအပြားရှိခဲ့သည်။
"ပန်းသီးပုံးကြောင့် သူဌေးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး၊ ဘဝပျက်သွားတဲ့သူတွေချည်းပဲ၊ ဘုရားသုံးဆူကလူတွေ လုပ်ကြွေးလို့ ထိုင်းသူဌေးတွေ ကားတစ်စီးပြီးတစ်စီး မိန်းမတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ယူနေတာ အမြင်ဘဲ ပန်းသီးပုံးက အမြတ်တွေ တစ်နေ့ကိုတစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်` ပန်းသီးပုံးကြောင့် ဘဝပျက်သွားရသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပန်းသီးပုံးဂိမ်းတွင် ထိုင်းငွေ ၁ ဘတ်မှ ဘတ် ၃၀ အထိလောင်းကစားနိုင်ပြီး စားရမည့်အဆထိုးမှာ ၅ ဆမှ အကြီးဆုံး အဆပေါင်း ၁၂၀ အထိရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်သောင်းအထိ လောင်းကစားသူများရှိသည်။
"ရက်စွဲအတိအကျတော့ မမှတ်မိဘူး ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ ဒီပန်းသီးပုံးဂိမ်း လောင်းကစားမှုကြောင့် ခိုးမှုတွေများလာတယ်၊ ဆိုင်ကယ်လုယက်မှုဆိုရင် ဒီမှာဆိုရင် ၆ ခါရှိပြီး၊ မနေ့တုန်းက ရပ်ကွက် ၂ နတ်စင်အနီးမှာ ခိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်"ဟု ၄င်းက ဆက်ပြီးပြောသည်။
ပန်းသီးပုံးဂိမ်းလောင်းကစားခြင်းတွင် များစွာဆုံးရှုံးသွားသောသူများ ကြံရာမရပဲ ဆုံးရှုံးသွားသော ငွေများကို ဖြတ်လမ်းနည်းရယူရန် ဆိုင်ကယ်များ လုယက်ခြင်းနှင့် ခိုးယူခြင်းများ စသည့် ဥပဒေနှင့်မကင်းသည့် ဒုစရိုက်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်လာကြသည်။
တစ်နေ့တွင် ဝင်ငွေတစ်ရာခန့်သာ ရှိသော လောင်းကစားသူများသည် ဘတ် ၇၀၀၀၊ ၈၀၀၀ ခန့် ရှုံးသွားလျှင် ထိုဆုံးရှုံးသွားသော ငွေများကို ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ၎င်းတို့ဝင်ငွေနဲ့ဆိုလျှင် အချိန်တော်တော်ယူမှာမို့ ဖြတ်လမ်းအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်လုယက်ခြင်းနှင့် ခိုးယူခြင်းများ လုပ်ကြရသည်ဟု ပြောသည်။
"တစ်မြို့လုံးအနေနဲ့ လူကြီးတွေရော ကလေးတွေရော ခြုံပြီးပြောရရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လောင်းကစားနေကြတယ်၊ ကျွန်တော့်အိမ်နားက ၁၂ နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် အပတ်တိုင်းကို သွားကစားတယ်၊ သူ့အမေဆီက ပိုက်ဆံတောင်းလို့မရရင် သူ့အမေကို ခဲနဲ့ပစ်တယ် ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်တွေကို ရင်လေးတယ် "ဟု ဘုရားသုံးဆူ မြို့သားတစ်ဦးက ၄င်း၏အတွေ့အကြုံကို ပြောပြခဲ့သည်။
လောင်းကစားနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ထိုင်းံဘက်ကမ်းတွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက အတင်းအကြပ် ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမ်းတွင်သာ အာဏာပိုင်များက အကောက်အခွန်များ ကောက်ခံကာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးထားခဲ့သည်။
ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကိုင်ကြသော ဘုရားသုံးဆူမြို့ဒေသခံများသည် သစ်များရှားပါးကြောင့် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများ ယိမ်းယိုင်လာခဲ့သည်က တစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ပိတ်သွားခဲ့ရမှုကြောင့် အလုပ်များရှားပါးလာခဲ့သည်ဟု ဘုရားသုံးဆူမြို့အတွင်း နေထိုင်သူတစ်ဦး ပြောသည်။
ဘိန်းခွန်ကောက်စားဖို့အရေး နအဖစစ်တပ် လွတ်လပ်စွာ ဘိန်းစိုက်ခွင့်ပေး
Wednesday, 05 November 2008 17:26
၂၀၀၈ နှစ်နှောင်းပိုင်း မိုင်းပြင်းမြို့နယ် မိုင်းပူးလုံအုပ်စု ဘိန်းခွန်ကောက်စားလွယ်သည့်လားဟူ ပြည်သူ့စစ်ထိန်းချုပ် နယ်မြေတွင် မိုင်းပြင်းအခြေစိုက် နအဖစစ်တပ်တို့ဒေသခံ များအား လွတ်လပ်စွာဘိန်းစိုက်ပျိုးခွင့်ပေးထားသည်ဟု နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
လာမည့် တန်ဆောင်မုန်းလ၌ ဘိန်းဆီခြစ်မည့် ဘိန်းခင်းကို တော်သလင်းလက စိုက်ပျိုးပြီး အချို့မှာပန်းပွင့်ဆဲ၊ အချို့ မှာသီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် မိုင်းပြင်းဒေသခံ အမျိုးသား တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
“ဒုတိယသုတ်ဘိန်းခင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်ကဘဲ ယာမြေရှင်းတာ။ ပလောင်ဒေသခံတွေက တောင်ကုန်း တွေမှာစိုက် တယ်။ မိုင်းပူးလုံအုပ်စု အနောက်ဘက် မိုဟိုင်း၊ ဟွေ့ပိန်း၊ မိုင်းပူးလုံတောင်ဘက် လွယ်ခီ့ခတ်၊ ပိန်းလုံ၊ မိုင်းပူးလုံအရှေ့ဘက် လုံဝိုင်၊ နားဟွန်၊နားမော် တို့ဘက်မှာ လားဟူတို့ဘိန်းခင်းတွေချည်းဘဲ။ အဲဒီဘက်မှာ ထိန်း ချုပ်နေတာ လားဟူပြည်သူ့စစ် ဂျဖိုးလူတို့ အဖွဲ့ပေါ့။ ဒေသခံ သျှမ်းတွေ အိမ်ခြေ ၂၀ လောက်ဘဲရှိတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
တစ်လတစ်ခေါက်သွားရောက်လှည့်လည်သော နအဖစစ်ကြောင်းတို့က ဆိုင်ရာရွာသူကြီးထံ၌သာ ဘိန်းခွန်ကောက်သည် ဟုလည်း ဆို၏။
“လားဟူပြည်သူ့စစ်က ၁ ဧက ၃၀ ကျပ်သား ဘိန်းခွန်ကောက်တယ်။ ပိုက်ဆံမယူဘူး၊ ဘိန်းဘဲယူတယ်။ နအဖ စစ်ကြောင်းတို့ ကတော့ ရွာသူကြီးကိုဘိန်းခွန်ကောက်ပေးခိုင်းတယ်။ ဘယ်လောက်လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ စစ်ကြောင်းမှူးကို ရွာသားတွေက ကြက်၊ ၀က်၊ အရက် တည်ခင်းဧည့်ခံရင် ‘တောတောင်တွေမှာနေတော့ ဘိန်းမစိုက်ရင်၊ သာမာန် ဆန်၊ ပြောင်းဘဲစိုက်ရင် ၀င်ငွေရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ’ လို့တောင် အားပေးသေးတယ်” ဟု မိုင်းပူးလုံအုပ်စု ဒေသခံပလောင်အမျိုးသမီး တစ်ဦးကလည်း ပြောပြသည်။
ဘိန်းခင်းအလုပ်သမားများ လုပ်အားခ တစ်ရက် ကျပ် ၂,၅၀၀ ရပြီး ယာထွန်ကျွဲပါ အလုပ်လုပ်ရပါက ကျွဲရောလူပါ လုပ်အားခ တစ်ရက် ကျပ် ၆,၀၀၀ ရသည်ဟုဆို၏။ ယခုနှစ် ဘိန်းသစ်ရောင်းဝယ်သည့် အစိမ်းဈေးနှုန်းမှာ ၁ ပိဿာ ကျပ် ၄၅၀ယ၀၀၀၊ ဘိန်း ဟောင်းတစ်ပိဿာ ကျပ် ၇၈၀,၀၀၀ အပြင် ရာဘတစ်ပြား ကျပ် ၁,၅၀၀ မှ ကျပ် ၂,၀၀၀၊ ဆေးတောင့် (ကက်ပ်ဆူး) သွင်းရောင်း သော ရာဘဆေးမှုန့် တစ်တောင့်ကျပ် ၂,၃၀၀ ရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။ ဒိုင်ခံ ရောင်းဝယ်သည့် လောပန်းကြီး မရှိသော်လည်း လားဟူ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များက မိုင်းဆတ်ဘက်မှ (ရာဘများ)ယူဆောင်၍ဒေသခံ များအားရောင်းပေးကြောင်း၊ ငွေကြေးကြွယ်ဝသူများ တစ်ဦးလျှင် ၃-၄ ဧကထက်မနည်း ရင်းနှီး၍ ဘိန်းစိုက်ပျိုးကြပြီး သံလွင်အနောက်ခြမ်းကျိုင်းခမ်းမှငွေရှင်အချို့လည်း မိုင်းပူးလုံဘက် သို့ ဘိန်းလာစိုက်ကြကြောင်း သိရပါသည်။
အန်တုစိန်ခေါ်၊ သင် ခေါင်းမော်အံ့၊
ကျား “ခြသေ့င်္ဆိုး”၊ “ကြံ့သိုး” “ဖွတ်” မြွေ
ရေပုတ် မိကျောင်း၊ သစ်ခေါင်းပင့်ကူ
အို - လင်းယုန်တို့
အမှောင်မင်းကို၊ ဖောက်ထွင်းဖြိုခွဲ၊ ရဲစေလော့။
အမှောင်မိုက်ကို၊ တိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်း၊ လင်းစေလော့။
အမှောင်ထုကို၊ အန်တုနှိမ်နင်း၊ ရှင်းစေလော့။
၂၀၀၈၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၁
အိုဘားမား နဲ့ အို … ဘားမား
လူမည်းဖခင်(ကင်ညာနိုင်ငံ - Kenya)နဲ့ လူဖြူမိခင် (အမေရိကန်၊ ကင်းဆတ်ပြည်နယ်- Kansas)တို့ နှစ်ဦးက မွေးဖွားလာတဲ့ ဘာရက်အိုဘားမား(Barack Obama) ဟာ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ နှစ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၄၄ ဦးမြောက် သမ္မတ ဖြစ်သွားပါပြီ။ အိုဘားမားဟာ ပြိုင်ဖက် ရီပတ်ဗလီကင်ပါတီက ဂျွန်မက်ကိန်း (John McCain)ကို မဲ အပြတ်သတ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးသော အာဖရိကန်အမေရိကန်လူမည်း သမ္မတ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ အမေရိကန်မှာသာမက ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးရှိ လူတွေ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ၊ ရေဒီယိုကနေ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲသတင်းကို နားထောင်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်းပဲ အလုပ်က ပြန်လာပြီးချင်း မိန်းမက အသင့်ဖွင့်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတီဗွီသတင်းကို ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင် မဲမထည့်ရပေမယ့်လည်း အိုဘားမားကို နှစ်သက်ထောက်ခံသူဖြစ်လို့ သူအနိုင်ရတာကြားရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
အမေရိကန်တ၀ှမ်းလုံး အိုဘားမားကိုထောက်ခံကြသူများ အလွန်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ တချို့ဆို ၀မ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်ကျတယ်။ စီအင်အင်(CNN) တီဗွီက ပြနေတဲ့ ချီကာဂို ဂရန့်တ်ပတ်ခ်(Grant Park) မှာ အိုဘားမားကိုထောက်ခံတဲ့ လူအုပ်ကြီးဟာ ခန့်မှန်းခြေ ၁၂၅,၀၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ နာမည်ကြီး အိုပရာဝင်းဖရီ (Oprah Winfrey)နဲ့ ဂျက်စီဂျက်ဆင် (Jesse Jackson) ကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း မျက်ရည်တွေနဲ့ပါ။
ချီကာဂို ဂရန့်တ်ပတ်ခ်က လူအုပ်ကြီးကို အိုဘားမားက
"ဒီနေ့ တမ္ဘာလုံးကို ထပ်မံပြီး သက်သေပြလိုက်တာက အမေရိကန်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့အင်အားဟာ လက်နက်အင်အားနဲ့ ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး၊ အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ စံနမူနာတွေဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ လွတ်လပ်မှု၊ အခွင့်အရေး၊ မဆုတ်မနစ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်"
"လကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ ခြေချနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာလင်တံတိုင်းကြီး ပြိုကျခဲ့တယ်၊ လူတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေကို သိပ္ပံနည်းပညာကျေးဇူးနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဆက်စပ်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တယ်၊ အသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့ အမှောင်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းလာဖူးတဲ့ အသက် ၁၀၆ နှစ်ရှိတဲ့ အဖွားအိုတစ်ယောက်က ဒီကနေ့ မဲလာထည့်ခဲ့တယ်၊ သူမက အမေရိကန်ဟာ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့ပါပဲ"
လို့ အိုဘားမားက ပရိသတ်ကို ပြောပြတော့ လူအုပ်ကြီးကလည်း
“Yes, we can …” (ငါတို့ ပြောင်းနိုင်တယ်) လို့ ပြန်လည် ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
အို … ဘားမား (Burma)
ကျနော် စဉ်းစားမိတယ် … မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သမ္မတဟာ ဥပမာအားဖြင့် မိုဟာမက်ဟာဂျီမောင်မောင် (သို့) ဒူးဝါးမောင်မောင် (သို့) နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျသူ ဆိုရင်ကော သင် လက်ခံနိုင်ပြီလား။
သင်ကော မပြောင်းလဲချင်ဘူးလား? သူတို့က “Yes, we can …” ဆိုရင် … သင်လည်း “Yes, we can too …” ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်ကြပါစို့လား …
အကျဉ်းထောင်တွင်း ရေးသားခဲ့သော ကဗျာ)
တလ ကုန်မလား၊ တဘဝ ကုန်မလား။
သိကြရဲ့လား … ဟား ဟား ဟား ဟား။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 05 2008 18:00 - မြန်မာစံတော်ချိန်
မွေးနေ့ သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်
ဇာတိ ဟိုနိုလူလူ၊ ဟာဝိုင်ရီ
မွေးအမည် ဘားရက် ဟူစိန် အိုဘားမား
လူမျိုး အာဖရိကန် - အမေရိကန်
ဇနီး မစ်ချယ်လီ အိုဘားမား (၁၉၉၂ လက်ထပ်)
သားသမီး မာလီယာ အန် (သမီး၊ ၁၉၉၈ မွေး)
နာတာရှာ (ဆာစ်ဟာ) (သမီး၊ ၂ဝဝ၁)
နေရပ် ချီကာကို၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်
ပညာရေး ဟားဗတ်ဥပဒေကျောင်း၊ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ အောစီဒင်တယ်ကောလိပ်
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယာန်
ဟာဝိုင်ရီရှိ အမေရိကန်တက္ကသိုလ် University of Hawaii at Manoa အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သည့် ကင်ညာနိုင်ငံသား လူမည်းလူမျိုး ဖခင် ဘားရက် ဟူစိန် အိုဘားမားနှင့် ဒေသခံ Kansas နယ်မှ အမေရိကန် လူဖြူလူမျိုး မိခင် Ann Dunham တို့ လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး အမေရိကန်သမ္မတ ဖြစ်လာမည့် ဘားရက် အိုဘားမားကို မွေးဖွားခဲ့သည်။
အိုဘားမား ၂ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများ ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်။ ဖခင်မှာ ကင်ညာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုင်ကယ် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားကာ သေဆုံးသည်အထိ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် အိုဘားမားမှာ တကြိမ်သာ တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။
မိခင်မှာ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး လိုလို ဆိုးတိုရိုနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ကာ ၆ နှစ်အရွယ် သားငယ် အိုဘားမားနှင့်အတူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ၁၉၆၇ ခုနှစ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြို့တော် ဂျာကာတာတွင် ၁၀ နှစ်အရွယ်အထိ ကျောင်းနေခဲ့ရသည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် မိခင်ဘက်မှ အဘိုးအဘွားများရှိရာ ဟာဝိုင်ရီသို့ သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဟာဝိုင်ရီရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း တခုဖြစ်သည့် Punahou ကျောင်းတွင် ၅ တန်းမှ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ကျောင်းပြီးသည်အထိ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မိခင်မှာ ဟာဝိုင်ရီသို့ ပြန်လာကာ အချိန်အတန်ကြာ အိုဘားမားနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ သူ၏ ဒေါက်တာဘွဲ့အတွက် သုတေသနပြုလုပ်ရန် အင်ဒိုနီးရှားသို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် သားအိမ်ကင်ဆာရောဂါဖြင့် မိခင်ကွယ်လွန်သည်။
အိုဘားမားသည် အထက်တန်းကျောင်း တက်ရောက်စဉ် ဆေးခြောက်၊ ကိုကင်းနှင့် အရက်များ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် လူထုဟောပြောပွဲတွင် ၀န်ခံခဲ့ပြီး စာရိတ္တရေးရာပျက်စီးမှု ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းအပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ရှိ Occidental College တွင် သွားရောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် နယူးယောက်မြို့ရှိ Columbia University သို့ ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ သူ့တွင် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ပညာရပ် အထူးပြုလေ့လာကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဖြင့် B.A ဘွဲ့ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၃ နှစ်ဦးပိုင်းမှ စတင်ပြီး Business International Cooperation တွင် တနှစ်ကြာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ New York Interest Research Group တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ချီကာကိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ဒေသခံ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ အခြေပြု လူထုစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့် Developing Communities Project - DCP တွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၃ နှစ်ကြာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သည်။ အိုဘားမား ဦးဆောင်သည့် ကာလအတွင်း ၀န်ထမ်းများ တိုးပွားလာကာ ၀င်ငွေမှာလည်း အောင်မြင် တိုးတက်လာခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ဥရောပသို့ သုံးပတ်ကြာသွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ဖခင်နှင့် ဆွေမျိုးများရှိရာ ကင်ညာသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဖခင်အပါအ၀င် ဆွေမျိုးများအား ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း ဟားဗတ် ဥပဒေကျောင်းသို့ ၀င်ရောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ တနှစ်အကြာ သူ၏ အရည်အချင်းကြောင့် ဟားဗတ် ဥပဒေသုံးသပ်ရေး ဂျာနယ်တွင် အယ်ဒီတာအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကာလတွင် ဥပဒေသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။ ပထမဆုံး လူမည်း ဥပဒေသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အယ်ဒီတာချုပ်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် အယ်ဒီတာ ၆ ဦးကို ဦးစီးလမ်းညွှန်သူအဖြစ်လည်းကောင်း ရွေးချယ်ခံရသည်။
ပထမဆုံး လူမည်း ဥပဒေသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရမှုအား ကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး အချိန်အတော်ကြာအထိ ဆွေးနွေးစရာကိစ္စ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် လူ့အသားအရောင်ကွဲပြားမှုများ ဆက်စပ်မှုအကြောင်း စာအုပ်ရေးသားရန် ကံထရိုက်ရခဲ့ပြီး၊ University of Chicago Law School က ထိုစာအုပ်ရေးသားရန် ၀န်ထမ်းတဦးနှင့် ရုံးခန်းတခုအား ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းစာအုပ်အား တနှစ်အတွင်း အပြီးသတ်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုများကို ရေးသားသည့် စာအုပ်အသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
“Dream From My Father: A Story of Race and Inheritance” စာအုပ်အား ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၎င်းစာအုပ်သည် အိုဘားမား နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲသို့ မ၀င်ရောက်မီ ဟားဗတ် ဥပဒေသုံးသပ်ရေးဂျာနယ် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့မှုများကို ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ University of Chicago Law School တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဥပဒေဘာသာရပ်အား ၁၂ နှစ်ကြာ သင်ကြားခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ အီလီနွိုက်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ဆက်တိုက်အရွေးခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် အရွေးခံရန် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံမဲဖြင့် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည်။
အမေရိကန်သမိုင်းတွင် ပဉ္စမမြောက် အာဖရိကန်-အမေရိကန်လူမျိုး အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီး၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်တွင် အေဗဟမ်လင်ကွန်း၏ ၁၈၅၈ ခုနှစ်အတွင်းက ကျော်ကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့သည့် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Springfield တွင် အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၌ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ဒီမိုကရက်ပါတီအတွင်း ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ဟီလာရီကလင်တန်နှင့် အချိန်အတော်ကြာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရသည်။
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE
Senator Obama Statement on Burma
"In Burma, thousands of ordinary citizens, inspired by their religious leaders, are calling for change in their long-suffering nation. We are witnessing the power of the human spirit -- and the power of non-violent protest consistent with Buddhist tradition. Yet tragically, today, in spite of the peaceful nature of this protest, the Burmese government began another brutal crackdown -- beating demonstrators, firing tear-gas and arresting hundreds. The military junta should halt this violence immediately, heed the will of the Burmese people, release Aung San Suu Kyi from house arrest, and begin the process of national reconciliation.
"The people of Burma have endured terrible oppression under that country’s brutal military junta. The heroes standing firm in the streets of Rangoon and other cities now deserve our strongest support. The United States and the international community must not wait for hundreds or thousands of people to be killed before taking additional action to try to prevent further violence from occurring.
"While, ultimately, change must come from within Burma, the international community has an important role to play to signal strong support for the courageous Burmese people. I have supported sanctions against Burma and welcome the additional sanctions the President announced at the UN General Assembly. But far more needs to be done -- immediately. It is not enough for the US to act alone. We must take the lead in working with the other key international players, particularly ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), India, Japan, the European Union, and especially China, to join the United States in pressing for the peaceful resolution of the current crisis in Burma and making clear the junta should not use force against peaceful protesters, including Buddhist monks.
"As the people of Burma stand up, we must stand with them."
Obama Statement on the Situation in Burma
For the last several days the world has watched the images of monks as they courageously and peacefully demand democracy in Burma – and the military junta's violent response. A regime that claims to be impervious to international criticism has moved to close off media and communications access to stem the flow of those images out of the country. The generals apparently believe that, without pictures, the world will eventually lose interest and move on. We must not allow this to happen.
I am pleased that the United Nations has dispatched Special Envoy Ibrahim Gambari to Burma and that he has met with Aung San Suu Kyi. I hope he will persuade the junta to openadialogue with the opposition, to release political prisoners, and to account for those who were killed or imprisoned in the last few days. Meanwhile, President Bush is right to try to increase pressure on Burma's repressive regime. I urge all nations, including the EU and Burma's neighbors, to cooperate in enforcing the financial sanctions the United States has imposed. The United States should also push foraUN Security Council Resolution to ban the provision of arms to Burma, and press China to help persuade the regime to beginaserious dialogue with Aung San Suu Kyi and those seeking democratic reform. We also should lead in chartingaunified course with ASEAN, China, India, Japan, and the EU to forgearoad map for change in Burma, and prevent the junta from playing countries off each other as they have in the past.
It is easy in this age to be cynical about the power of people to bring about change. But ordinary people armed with courage and hope are not powerless; they are history's mightiest force, even before the guns ofabrutal regime. We must remain true to their cause and honor their bravery.
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE: May 8, 2008
CONTACT: Liz Richardson (Kerry) 202 224 4159 or Michael Ortiz (Obama) 202 228 5566
WASHINGTON, DC - The Senate has passedaresolution introduced by Senator John Kerry andabipartisan group of 19 Senators urging humanitarian aid to the Burmese people following the devastation of the cyclone and accompanying tidal wave. There are currently 100,000 people dead and tens of thousands missing, with disease spreading rampantly throughout the flooded country. The resolution was cosponsored by Foreign Relations Chairman Joe Biden (D-DE), Ranking Member Richard Lugar (R-IN), Senate Republican Leader Mitch McConnell (R-KY), along with Senators Dianne Feinstein (D-CA), Dick Durbin (D-IL), Chris Dodd (D-CT), Barack Obama (D-IL), Jim Webb (D-VA), Lisa Murkowski (R-AK), Ted Kennedy (D-MA), Bob Menendez (D-NJ.), Russ Feingold (D-WI), Joe Lieberman (D-CT) Chuck Hagel (R-NE), Barbara Boxer (D-CA), Hillary Clinton (D-N.Y.), Mary Landrieu (D-LA) and Elizabeth Dole (R-N.C.)
Obama Statement on the Continued Detention of Aung San Suu Kyi in Burma
WASHINGTON, DC – U.S. Senator Barack Obama (D-IL) today released the following statement on the ongoing detention of pro-democracy leader Aung San Suu Kyi in Burma, on her 62nd birthday:
“Birthdays are supposed to be celebrations--moments of joy spent with friends and family. Today is Aung San Suu Kyi’s 62nd birthday and it will be neither of these. She will spend this day, as she has eleven of her last seventeen birthdays, under house arrest -- the continuing target ofarepressive military junta that rules Burma with an iron fist and has mismanaged the country both economically and politically.”
“The junta fears Aung San Suu Kyi, because in 1990, the people of Burma overwhelmingly chose her and her National League for Democracy to lead the country. To this day, the Burmese military has ignored the election results. But, she has not let them forget. Risking her own safety, she has consistently spoken out against the government’s imprisonment of its critics and its violations of human rights.”
“The world has taken note. For her steadfast bravery she was awarded the Nobel Peace Prize and, characteristically, used the $1.3 million award to establishahealth and education trust for the Burmese people. By contrast, the junta has ignored the health and safety of its citizens, generating over2million refugees, making the countryacenter for heroin and methamphetamine production, and driving the country to the brink of economic collapse.”
“Today, I stand in solidarity with Aung San Suu Kyi, call for her immediate and unconditional release, and look forward to the moment when she can celebrate her birthday with friends, family and colleagues in joy and in freedom.”